အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: 03/01/2010 - 04/01/2010
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, March 31, 2010 Wednesday, March 31, 2010 Labels: ဘာသာပြန် ခံစားမှု ၀တ္ထုများ
ကျင့်ဝေ နှင့် ရင်ရင် မှာ တစ်မြို့ထဲတွင် ကြီးပြင်းလာကြသူများ ဖြစ်ပြီး ငယ်စဉ်ထဲက ကျောင်းအတူတူ တက်လာကြတဲ့ သူများလည်းဖြစ်သည်။ အရွယ်ရောက်လာချိန်မှာတော့ သူတို့ နှစ်ယောက်သည် တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် အလွန်ချစ်ကြသော ချစ်သူများ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယောက်ျားပီသပြီး သူမအပေါ် နုညံ့စွာ ဆက်ဆံတတ်သူ ကျင့်ဝေကို ရင်ရင် က ယုန်ကလေးလို့ ခေါ်လေ့ရှိပြီး၊ ကျင့်ဝေကတော့ ရင်ရင်လို့ပဲ ခေါ်လေ့ရှိကာ တစ်ခါတစ်ရံ မှာတော့ အရူးမလေးလို့လည်း ချစ်စနိုးဖြင့် ခေါ်တတ်ပြန်သည်။ တက္ကသိုလ် တက်တော့လည်း ဇာတိမြို့နှင့် အနည်းငယ်ဝေးသော မြို့ကြီးတစ်ခုမှာ သူတို့ နှစ်ယောက် အတူတူ တက်ခဲ့ကြသည်။ နှစ်ယောက်သား တက္ကသိုလ် ရက်များကို ပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင် ကျော်ဖြတ်လာကြပြီးသည့် နောက်မှာတော့ ဘွဲ့တစ်ခုစီ အသီးသီး ရသွားခဲ့ကြလေပြီ။
ဘွဲ့ယူပြီး နောက်တစ်နေ့မှာ ရင်ရင်မှ ယုန်ကလေးကို ရှေ့ရေးကိစ္စ တိုင်ပင်စကား ဆိုလေသည်။
“ယုန်ကလေးရေ ငါတော့ ပီကင်းမြို့နားမှာ ရှိတဲ့ ဆီလီကွန်တောင်ကြားမှာ သွားပြီး အလုပ် လုပ်တော့မယ် အဲဒီနေရာက နောက်ကို ဒီထက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ အများကြီး ရှိနေတယ်… အလုပ်အကိုင်လဲ မရှားဘူးလေ နင်ရော ဘယ်လို စဉ်းစားထားလဲ ”
“အင်း ဒါဆိုရင် ငါကတော့စီချွမ်းကိုဘဲ ပြန်တော့မယ်.. ငါတို့ ဇာတိဒေသက အလှအပတွေ ပေါတယ်၊ သာလည်းသာယာတယ်.. နောက်ကိုလဲ ဒီထက် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာဦးမှာ.. ပြီးတော့ ကောင်မလေး တွေလည်း ချောတယ်.. တကယ်လို့ နောက်ကို နင်ငါ့ကို မယူလဲ ငါပူစရာမလိုဘဲ တစ်ခြားကောင်မလေး ချောချောလေးတွေကို ရနိုင်သေးတယ်လေ”
ပြုံးရယ်ရင်း ပြောလိုက်သော ယုန်ကလေးရဲ့ စ နောက်မှုကြောင့် ရင်ရင်က သူ့ရင်ဘတ် ကလေးကို လက်သီးဆုတ်ကလေးနှင့် ခပ်ဖွဖွ ထုလိုက်ရင်း
“နင်ကလေ အားနေရင် ဒါဘဲ စဉ်းစားနေတယ် မိန်းမယူဖို့ အကြောင်းဘဲ.. ဘယ်ရမလဲ… ငါနင့်ကိုမယူတောင်မှ နင်တစ်ခြားကောင်မလေးတွေကို မကြိုက်ရပါဘူး.. ငါ့ကိုဘဲချစ်ရမယ်.. ငါ့အကြောင်းဘဲ စဉ်းစားရမယ်.. နင်တစ်ခြားကောင်မလေး တစ်ယောက် ယောက်နဲ့ ပတ်သက်ဖို့ လုံးဝခွင့်မပြုနိုင်ပါဘူး.. ဟွန့် ” လို့ ချစ်စဖွယ် အမူအရာလေးနဲ့ ပြန်ပြောလိုက်တော့သည်။
ယုန်ကလေးက ရင်ရင့်ရဲ့ လက်ကလေးကို အသာအယာ ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး နဖူးကို ညင်ညင်သာသာ ဖွဖွရွရွလေး နမ်းရှိုက်လိုက်ရင်း
“ အရူးမလေး… ငါတို့မိဘတွေက စီချွမ်းမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာ မေ့လို့ မဖြစ်ဘူးလေ... နင်က တိုးတက်ချင်တဲ့သူ ဆိုတော့ ပီကင်းသွားပြီး အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ငါမပြန်လို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ.. နင့် မိဘတွေကိုလဲ နင့်ကိုယ်စား ငါက စောင့်ရှောက်ပေးရမှာပေါ့.. ဒါမှ သမက်ကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်လာမယ်လေ မဟုတ်ဘူးလား... နင့်ကိုလဲ ငါယုံကြည်စိတ်ချပါတယ်.. နင်လုပ်ချင်တာကိုလဲ မတားမြစ်ချင်ဘူး.. ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အကြာကြီးတော့ မခွဲချင်ဘူးဟာ နင်မြန်မြန် ပြန်လာခဲ့နော် ”
ယုန်ကလေးရဲ့ စကားအဆုံးမှာ ရင်ရင့်ရဲ့မျက်ဝန်းမှ မျက်ရည်များ ရစ်ဝိုင်းလာပြီး ရင်ခွင်ထဲကို တိုးဝင်လိုက်ကာ ချုံးပွဲချ ငိုကြွေးနေတော့သည်။
နှစ်ဦးသား အနေဝေးသွားကြသော်လည်း အဆက်အသွယ်က အမြဲမပြတ် ရှိနေခဲ့ကြသည်။ ဖုန်းဖြင့် အမြဲ အဆက်အသွယ် ရှိသလို မက်ဆေ့လေးတွေပို့ကာ ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ သံယောဇဉ်ကြိုးတွေ ခိုင်မြဲအောင် တည်ဆောက်ထားကြသည်။ တစ်နေ့တွင် ရင်ရင်က အလွန်ချစ်ကြသော ချစ်သူနှစ်ဦး အကြောင်း ရေး ထားသော ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုကို အင်တာနက်ကနေ ဖတ်လိုက် ရပါသည်။ ဇာတ်လမ်း ထဲတွင် ကောင်မလေးက သူ့ချစ်သူ ကောင်လေးနှင့် ဖုန်းပြောပြီးတိုင်း ကောင်လေးကို အရင်ဆုံး ဖုန်းချစေသည့် အကြောင်းလေးက ပါဝင်နေသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဖုန်းချခိုင်းခြင်း သည် ကောင်မလေးက ကောင်လေးကို အရမ်း ချစ်လွန်း၍ ဆိုသည့် အဓိပ္ပါယ်နှင့် ကောင်လေးကို ဖုန်းအရင် ချစေသည် တဲ့လေ။ ထိုနံမည်ကျော် လူငယ်ကြိုက် အချစ် ဇာတ်လမ်းလေးကို ဖတ်ပြီး ရင်ရင်က သူ့ချစ်သူကို ထူးထူးကဲကဲ သတိရနေမိသည်။
ထိုညက ခါတိုင်းကဲ့သို့ ဖုန်းပြောပြီးချိန်တွင် ရင်ရင်က သူဖတ်ထားသော ဇာတ်လမ်းလေး ထဲက အတိုင်း ယုန်ကလေးကို တောင်းဆိုလိုက်သည်။
“ဖုန်းကို နင်အရင်ချနော်.. ”
“အရူးမလေး ဘာအရူးထပြန်ပြီလဲ .. ဘယ်သူအရင်ချချပေါ့ ဘာထူးမှာမို့လဲ”
“အိုး မရပါဘူး.. နင်အရင်ချရမယ်.. နင်ငါ့စကား နားမထောင်ဘူးလား ဒါဆို နောက်နေ့ကစပြီး နင့်ကို ငါမခေါ်တော့ဘူး.. ငါ့ဆီလဲ ဖုန်းမဆက်နဲ့တော့.. နင်လဲ ဘယ်တော့မှ မိန်းမရတော့မှာ မဟုတ်ဘူး.. ”
ရင်ရင့် စကားကြောင့် ယုန်ကလေး ခေတ္တအသံတိတ်သွားသည်။ ထို့နောက်
“အင်း အိုကေ အိုကေ ငါရန်မဖြစ်ချင်ပါဘူး.. ငါအရင်ဖုန်းချပါ့မယ် .. ”ဟု ပြောပြီး ဖုန်းကို ချသွားတော့သည်။
ဖုန်းချပြီးမှ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ Busy သံလေးကို သေချာနားထောင်ပြီး ရင်ရင် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ပြုံးလိုက်မိသည်။ သူမမျက်နှာပေါ်တွင် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ အပြုံးလေးနှင့်အတူ “အချစ်ရေ မင်းထက်ကို ငါက ပိုချစ်လို့ ဖုန်းကို အရင် ချခိုင်းတာပါကွယ်.. ” လို့ တီးတိုးလေး ပြောလိုက်ပါတော့သည်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ဖုန်းတွေပြောတိုင်းလည်း တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် နှုတ်ဆက်ပြီးကြတဲ့ အချိန်မှာ ကောင်မလေးဟာ ယုန်ကလေး၏ ဖုန်းချသံလေးကို နားထောင်ပြီးမှသာ ဖုန်းကို ပိတ်လေ့ရှိသည်။
သို့သော်လည်း အချိန်ကြာလာသော အခါတွင်တော့ ကောင်မလေး၏ ရင်ထဲတွင် ယုန်ကလေး ဖုန်းအရင်ချသည့် ကိစ္စနှင့်ပါတ်သက်ကာ တစ်စုံတစ်ရာ ခံစားချက်ကြောင့် ၀မ်းနည်းစိတ် ဖြစ်ပေါ် လာမိပါသည်။ သူ့ကို ဖုန်းအရင် ချခိုင်းတာဟာ သူမက ပိုချစ်လို့ဆိုတာ သိမှသိပါ့မလား ဟုလည်း စိတ်ထဲမှာ တွေးတောလာမိသည်။ ယုန်ကလေးကိုလည်း ထို အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကို တွေ့ပြီး ဖတ်စေချင်မိကာ သူမကို ဖုန်းအရင် ချဖို့ ပြောလာ တာကို မျှော်လင့်ချင်မိသည်လေ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ရင်ရင့်စိတ်ထဲတွင်တော့ သူမဟာ ယုန်ကလေးကို သိပ်ချစ်လွန်းသူ၊ ယုန်ကလေး ချစ်တာထက်ပိုပြီး သူမက ပိုချစ်ရသူရယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ ယူဆထားလိုက်သည်။
တိုးတက်ချင်သည့် စိတ်ကြောင့်သာ အလုပ်လုပ်နေရသော်လည်း မြို့နှင့် အနည်းငယ် အလှမ်းဝေး ချောင်ကျပြီး လုံခြုံရေး သိပ်မကောင်းလှသော ရင်ရင် လက်ရှိရောက်နေရာ အရပ်ဒေသသည် မိန်းခလေးများ အနေနှင့် နေထိုင်ဖို့ သိပ်ပြီး မသင့်တော်လှပေ။ လူဆိုး သူခိုးလည်း ပေါများလှသည်။ ယုံကြည်ချက်၊ မျှော်လင့်ချက်တို့ကြောင့်သာ နေနေရပေမဲ့ သူမစိတ်ဓာတ်တွေက တစ်ဖြေးဖြေး ကျဆင်း လာသည်။ နေပျော်ချင်စရာ အရပ်လို့ သူမက မထင်တော့ပေ။ အားငယ်စိတ်များ၊ မွန်းကြပ်သည့်စိတ်များလည်း တစ်စစ တိုးပွားလာ နေသည်။ သို့သော်လည်း ယုန်ကလေးကို သူမ ဖြစ်နေသည့် ခံစားချက်များကို တစ်စွန်းတစ်စမျှ မပြောပြဖြစ်ပေ။ သူမက ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ဓာတ် ခိုင်မာသူရယ်လို့လဲ သူ့ကို သိစေချင် နေမိသည်။
တစ်နေ့ သူမ၏ အခန်းဖော် ကောင်မလေး မိသားစုကိစ္စကြောင့် အိမ်ပြန်သွားသောအခါ သူမတစ်ယောက်တည်း အခန်းတွင် ကျန်ရစ်ခဲ့လေသည်။ ခုတစ်လောတွင် သူခိုးများက မိန်းခလေးတွေချည်း နေထိုင်သော နေရာများတွင် ပိုပြီး သောင်းကျန်းနေသည် ဆိုသည့်သတင်းကို ကြားနေရသည့်အတွက်လည်း ကြောက်ရွံ့စိတ် ဖြစ်ပေါ်နေမိသည်။ ညရောက်ချိန် ယုန်ကလေးနှင့် ဖုန်းပြောသောအခါတွင်တော့ ပုံမှန်အတိုင်း ခါတိုင်းလိုသာ ဖုန်းပြောဖြစ်ပေမယ့် သူမရင်ထဲက ကြောက်ရွံ့စိတ်ကို ယုန်ကလေး မသိအောင် ဖုန်းကွယ် ထားခဲ့သည်။
ညသန်းကောင် သူမ အိပ်ပျော်နေစဉ်မှာ တီးတိုးသံတစ်ခုကြောင့် ရုတ်တရက် လန့်နိုးလာခဲ့သည်။ သေချာ နားစိုက် ထောင်သည့်အခါ သူမ အခန်းတံခါးကို အပြင်ဘက်က ဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားနေသံကို ကြားလိုက်ရသဖြင့် ကြက်သီးမွေးညင်းများ ထောင်ထလာပြီး သူမတစ်ကိုယ်လုံး တစ်ဆတ်ဆတ် တုန်ယင်လာမိသည်။ ဘေးဝန်းကျင် အခန်းများတွင်လည်း လူမရှိကြသည်ကို သူမ သတိရလိုက်မိသဖြင့် မျက်ဝန်းမှ မျက်ရည်များ စီးကျလာကာ ကြံရာမရ ဖြစ်ပြီး ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်နေမိသည်။ သူမ ပထမဆုံး သတိရမိသည်မှာ ချစ်သူ ယုန်ကလေး ကိုသာ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ခေါင်းအုံးအောက်က ဖုန်းကလေးကို ဆွဲထုတ်ကာ ယုန်ကလေးရေ… ငါအခုချိန်မှာ အရမ်းကြောက်နေတယ် ဆိုသည့် မက်ဆေ့တစ်စောင် အမြန်ဆုံးရိုက်ပြီး ကောင်လေးဆီ ပို့လိုက်မိသည်။
ဒီချိန်ဆို သူ့ချစ်သူ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်မောကျနေခဲ့ပါက မက်ဆေ့ဝင်သောအသံကို ကြားနိုင်မှာ မဟုတ်သည့်အပြင်၊ ဖုန်းကိုပိတ်ထားခဲ့လျှင်လည်း မက်ဆေ့ကို မည်သို့မျှ တွေ့နိုင်မှာ မဟုတ်ဟု တွေးမိသဖြင့် သူမရင်ထဲမှာ မျှော်လင့်ချက်များ ကင်းမဲ့ကာ ကူကယ်ရာမဲ့သူ တစ်ယောက်၏ ခံစားချက်မျိုးနှင့် တုန်လှုပ်လို့ နေမိသည်။
သို့သော် သူမ မက်ဆေ့ ပို့ပြီး စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာမှာ ယုန်ကလေး ထံမှဖုန်း ဝင်လာသည့်အတွက် ဝမ်းသာလွန်း၍ သူမလက်တွေတောင် တုန်ယင်နေခဲ့သည်။
“ယုန်ကလေးရေ ငါ့ကိုကယ်ပါဦးဟယ်.. အခု ငါ့အခန်းရဲ့ အပြင်ဘက်မှာ သူခိုး ရောက်နေတယ် နဲ့တူတယ်.. တံခါးကို ဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ ငါထင်တယ်.. ငါ ငါ အရမ်းကြောက်နေတယ်” လို့ လေသံတိုးတိုးလေးနဲ့ သနားစဖွယ် အားကိုးတကြီး ပြောလိုက်သည်။ ရင်ရင့်ရဲ့ တုန်လှုပ်နေသော အသံလေးနှင့် ဆန့်ကျင်စွာ ယုန်ကလေးမှ တည်ငြိမ် စွာဖြင့်
“ ရင်ရင် နင်မကြောက်နဲ့နော် နင့်ဘေးမှာ ငါရှိနေတယ်လို့ တွေးထား အခု ငါပြောတာ သေချာနားထောင်.. ဖုန်းရဲ့ စပီကာကို အကျယ်ဆုံးဖွင့်လိုက် ပြီးတော့ တံခါးနားကို ကပ်သွား တံခါးနားရောက်တာနဲ့ ငါ့ကိုပြော… သိပ်မကြောက်နဲ့ ငါ့ကို ယုံကြည်တယ်ဆိုရင် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လုပ်…” ဟု ပြောလိုက်သည်။
ယုန်ကလေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို သူမ သဘောပေါက်သွားသည်။ တစ်ဖြေးဖြေးနှင့် တည်ငြိမ်လာပြီး တံခါးနားကို တိတ်ဆိတ်စွာ တိုးကပ်သွားသည်။ တံခါးနားကို ရောက်လျင်
“ငါတံခါးနားရောက်ပြီ စပီကာလဲဖွင့်ထားပြီးပြီ” ဟု ယုန်ကလေးကို တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်သည်တွင် ဖုန်းထဲမှ ယုန်ကလေးအသံက ဟိန်းထွက်လာသည်။
“ ဟေ့ တံခါးအပြင်ဘက်မှာ ဘယ်သူလဲကွ… အစ်ကိုတို့ ထကြထကြ.. အပြင်မှာ ဘယ်သူတွေလဲမသိဘူး.. ”
ကျယ်လောင်ပြီး မာကြောလှသော လေသံကြောင့် ရင်ရင် ကိုယ်တိုင်ပင် ရုတ်တရက် လန့်ဖြန့် သွားမိသလို အပြင်ဘက်မှာလည်း ထွက်ပြေးသွားသော ခြေသံကို ကြားလိုက်ရသည်။ သူခိုးသည် ရင်ရင်တို့အခန်းတွင် ယေက်ျားလေးများသာ နေသည်ဟု ထင်ပြီး ကြောက်ရွံ့ကာ ထွက်ပြေးသွားပုံရလေသည်။ ရင်ရင်လည်း ဒီတွင်မှသာ အသက်ကို ပြင်းစွာ ရှူရှိုက်လိုက်ပြီး ခြေလက်တွေပင် ပျော့ခွေသွားကာ တံခါးဝမှာတင် ခြေပစ်လက်ပစ် လဲကျ သွားလေတော့သည်။
အနည်းငယ်ကြာမှ ရင်ရင့်ထံက “အချစ်ရယ် နင့်ကို ငါ ကျေးဇူး တင်လိုက်တာဟာ.. ” ဆိုသော အသံထွက်လာသဖြင့် ယုန်ကလေးကလည်း အားပေးစကားပြောရင်း ပြန်နှစ်သိမ့် ပေးနေသည်။ ထိုညက တစ်ညလုံး မိုးလင်းချိန်ထိ ယုန်ကလေးက သူမကို စကားတွေ ပြောကာ အဖော်လုပ်ပေးနေသည်မှာ မိုးစင်စင်လင်းတော့မှသာ “ အချစ်လေး.. အရူးမလေးရေ အလုပ်ကို သတိနဲ့သွားနော်.. အလုပ်မှာ အိပ်မငိုက်အောင်လဲ ဂရိုစိုက်ဦး.. တော်ကြာ နင့်သူဌေးရှေ့မှာ အိပ်ငိုက်နေဦးမယ်” ဟုပြောပြီး ဖုန်းချသွားသည်။
ဖုန်းချလိုက်ပြီးသည့် နောက်မှာလည်း သူမ၏ ရင်ထဲတွင် ကြည်နူးနစ်သိမ့်ခြင်း၊ ကျေနပ် ပီတိဖြစ်ခြင်းများ အတိုင်းမသိ ဖြစ်ကာ ယုန်ကလေးသည် သူမ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးကို လုံခြုံမှု ပေးသွားနိုင်လိမ့်မည်ဟု အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်လိုက်မိသည်။ ယုန်ကလေးသည် သူမအပေါ်မှာ သိပ်ကောင်းသည် ဆိုသည့်အချက်ကို သံသယမရှိသော်လည်း သူမကို ဖုန်းအရင်ချဖို့ ဘယ်တော့မှ ပြောတော့မှာ မဟုတ် ဆိုသည့် အတွေးကိုတော့ သူမ ဖျောက်လို့ မရသေးပေ။ ယုန်ကလေးသည် သူမချစ်သလောက် မချစ်လို့သာ ဖုန်းအရင်ချဖို့ ဘယ်တော့မှ မပြောတာပဲ ဟူ၍လည်း ရူးရူးနမ်းနမ်း တွေးနေဆဲပဲ ဖြစ်သည်။
နွေဦး ရာသီကို ရောက်လာသဖြင့် တစ်ဖြေးဖြေး ပူပြင်းလာပြီ။ သူမဝတ်သော အင်္ကျီပါးလေးတွေမှာ ထည့်စရာအိတ် မပါသည့်အတွက် ဖုန်းကို သွားလေရာ ယူသွားဖို့ မကြာခန မေ့လျော့တတ်လာသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ရုံးကိုလာသောအခါ အိမ်ခန်းထဲတွင် ဖုန်းကိုမေ့ခဲ့တတ်သည်၊၊ ကင်တင်းတွင် ထမင်းသွားစားသော အချိန်တွင်လည်း ဖုန်းကို ရုံးခန်းထဲက သူမစားပွဲထဲတွင် မေ့ကျန်ခဲ့တတ်ပြန်သည်။ သူ့အခန်းဖော် ကောင်မလေးက ဖုန်းကိုငှားပြီး အပြင် ထွက်သွားသည့်အခါတွင်လည်း ပြန်တောင်းဖို့ သတိမေ့နေတတ်သည်။ ထို အချိန်တွေမှာ ကောင်လေးဆီက ရောက်နေတတ်သော မက်ဆေ့ပေါင်း များစွာ၊ ကိုင်သူမရှိသဖြင့် ပြန်မထူးဖြစ်သော Missed Calls များစွာအတွက် သူမစိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်မှုလေး တစ်မျိုး ခံစားရသည်။ သူမကို ဘယ်တုန်းကမှ ဖုန်းအရင်ချပါလို့ မပြောတတ်ခဲ့သော ယုန်ကလေးအတွက် ထိုက်တန်သော အပြစ်ပေးခြင်း တစ်မျိုးဟု သူမစိတ်ထဲ ကျေနပ်မိတတ်သည်။
ဒီလိုနှင့် သူမ၏ ဘဝကို ပြောင်းလဲစေမည့် မေလ ၁၂ ရက်နေ့သို့ ရောက်လာခဲ့သည်။ ထူးခြားမှုမရှိသော သာမန်နေ့လေး တစ်နေ့အဖြစ်နှင့် ရုံးတွင် လုပ်စရာရှိသောအလုပ်များကို လုပ်နေခဲ့မိချိန်မှာ မမျှော်လင့်သော သတင်းတစ်ခု သူမ ကြားလိုက်ရသည်။ အလွန် ပြင်းအားကြီးသော ငလျှင်တစ်ခုသည် စီချွမ်းဒေသကို ဗဟိုပြုပြီး လှုပ်ခတ်သွားခဲ့ကြောင်းနှင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှု များပြားလွန်းလှသည် ဆိုသော သတင်းများ ဆက်တိုက်ဝင်လာသောအခါ သူမ ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်သွားတော့သည်။ ရုတ်တရက် အသိစိတ်ဖြင့် သူမ၏ အိတ်ထဲတွင် လက်ကိုင်ဖုန်းကို လိုက်ရှာသည့်အခါမှ အိမ်တွင် မေ့ကျန်နေခဲ့မှန်း သိလိုက်ရတော့သည်။ သူမချက်ခြင်းဘဲ ရုံးဖုန်းကို ကောက်ကိုင်ကာ ယုန်လေးဆီကို ဖုန်းခေါ်လိုက်သည်။ ထပ်ခါထပ်ခါ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ခေါ်ဆိုသော်လည်း တစ်ဖက်က ဖုန်းလိုင်းက လုံးဝကို အလုပ်မလုပ်တော့ပေ။ သူမ၏ မိဘအိမ်ကို ခေါ်ပြန်တော့လည်း ထို့အတူပဲ ဖြစ်နေသည်။ စီချွမ်းဒေသ၏ ဖုန်းဆက်သွယ်မှု ကွန်ယက် တစ်ခုလုံး ငလျှင်ဒဏ်ကြောင့် ဆိုးဝါးစွာ ပျက်စီးသွားခဲ့လေပြီလား။
စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဆောက်တည်ရာမရအောင် ဖြစ်နေမိသည်။ ကြားရသော သတင်း မှန်သမျှကလည်း သူမရင်ကို မီးတစ်စလို ပူပြင်း လောင်မြိုက်နေစေသည်။ အလုပ်ကိုလဲ ဆက်မလုပ်နိုင်တော့သလို ရုံးဆင်းချိန်ထိ စောင့်နေဖို့ရန်လည်း သူမ မတည်ငြိမ်တော့ပေ။ တက္ကစီတစ်စီးကို တားလိုက်ကာ သူမနေထိုင်ရာ အခန်းကို ပြန်ပြေးလာမိတော့သည်။ အခန်းရောက်လို့ ဖုန်းကိုတွေ့သည့်အချိန်မှာတော့ သူမမျှော်လင့်ထားသလို Missed Calls ပေါင်း ၅၀ ကျော် ရှိနေသည်။ အားလုံးသည် ယုန်ကလေး ထံမှ လာထားသော ဖုန်းများသာ ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် Voice Message နှစ်ခုကိုလည်း တွေ့လိုက်ရသည်။ သူမရဲ့လက်တို့ တုန်ယင်စွာဖြင့် ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည့်အခါ.....
အရူးမလေး ငါရဲ့ အချစ်လေးရေ.. မင်းကို ချစ်ခဲ့သမျှ တစ်ဘ၀လုံးစာ အချစ်တွေနဲ့ မင်းဖုန်းကို ငါခေါ်နေတာပါကွယ်.. မင်းဘာလို့များ ဖုန်းမကိုင်ရတာလဲကွယ်။ မင်းကို ငါချစ်တယ်.. အရမ်းချစ်တယ်.. မင်းထင်မှတ်မထား လောက်အောင်ကို ချစ်ပါတယ်.. မင်းချစ်တာထက်လည်း အဆများစွာ ပိုချစ်ပါတယ်.. မင်း ငါ့ကို ဖုန်းအရင်ချခိုင်းကတည်းက ဟိုဇာတ်လမ်းလေးကို မင်းဖတ်လိုက်ရပြီဆိုတာ ငါသဘောပေါက်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့အချစ်ရယ် ငါမင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်.. မင်းချစ်တာထက် များစွာ ငါက မင်းကို ချစ်ရတာပါ.. ငါလဲ အဲဒီဇာတ်လမ်းကလေးကို ဖတ်ရပါတယ်.. အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ဖတ်ခဲ့ပြီးပါပြီ.. ကြေကွဲစရာနဲ့ အဆုံးသတ်ထားတဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းကလေးက ငါတို့နဲ့ ဘာများသက်ဆိုင်လို့လဲကွယ်.. ငါက မင်းကို ဒီလို နာကျင် ကြေကွဲမှုတွေ ပေးမဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး.. မင်းစိတ်ချမ်းသာအောင် မင်းပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ပေးမဲ့သူပါ.. မင်းနဲ့ ရာသက်ပန် ရိုးမြေကျပေါင်းလို့ တစ်ဘ၀လုံးအတွက် မင်းကို စောင့်ရှောက် ကာကွယ်ပေးမဲ့သူပါ..
တုန်ယင်စွာနှင့် ထွက်ပေါ်နေသော ယုန်ကလေး၏ အသံသည် ဖြည်းညင်းစွာဖြင့် သူမ နှလုံး အိမ်ထဲ အထိ တိုးဝင်လာနေသည်။ ရင်ခွင်တစ်ခုလုံး တဆစ်ဆစ်ဖြင့် နာကျင်လွန်းလှသည်။ အရာ ဝတ္ထုများ ပြိုကျနေသော နောက်ခံသံတို့ကြောင့် သူမလက်များ တဆတ်ဆတ် တုန်ယင်နေသည်။ ယုန်ကလေး နင် ဘာတွေများ ဖြစ်နေပြီလဲကွယ်....။ ဖုန်းကို နားထဲ ဝင်မတတ် တိုးကပ်လိုက်မိသည်။
ပြီးတော့လဲ စိတ်ကူုးယဉ် ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ မင်းကို နစ်မြောမနေစေချင်ဘူး.. ငါတို့က တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀ကို ထူထောင်ကြမှာဖြစ်လို့ လက်တွေ့ဆန်တဲ့ ပျော်ရွှင်မှုမျိုးကိုဘဲ မင်းကို ငါက ပေးချင်ခဲ့တာပါ.. ငါလေ ငါဘယ်သွားသွား ဖုန်းကို ယူသွားဖို့ မမေ့ခဲ့ဘူး.. တကယ်လို့ မင်းသိပ်လိုအပ်လို့ ငါ့ကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တဲ့အခါ ငါအဆင်သင့်ဖြစ်မနေခဲ့မှာကို သိပ်ကြောက်မိတယ်. မင်း အားငယ်နေတဲ့အခါ ကြောက်ရွံ့နေတဲ့အခါ ငါ့ကိုခေါ်မရမှာ ငါသိပ်စိုးရိမ်တယ်.. အဆုံးစွန် အိမ်သာထဲ ရောက်တဲ့အချိန်တောင် ဖုန်းကို မမေ့မလျော့ ငါယူသွားခဲ့တယ်.. ညအိပ်တဲ့အခါလည်း ဖုန်းကို ဘယ်တော့မှ ငါမပိတ်ခဲ့ဘူး.. ဘက်ထရီအသစ်လဲပြီး ဖုန်းသံကို ကျယ်ထားခဲ့တယ်... ငါအိပ်မောကျနေတုန်း မင်းဖုန်းလာခဲ့ရင် ငါမသိလိုက်မှာ စိုးလို့ပါ. ညသန်းကောင်ကြီး ကြောက်လန့်လို့ မင်းဖုန်းခေါ်တဲ့အခါ ငါမသိလိုက်မှာ၊ မကြားလိုက်မှာကို သိပ်စိုးရိမ်မိပါတယ်.. ပြီးတော့ ဖုန်းပိတ်ပြီး ငါအိပ်တဲ့အခါ တစ်နယ်တစ်ကျေးမှာ မင်းတစ်ယောက်တည်း ပိုပြီး အထီးကျန် အားငယ်နေမယ်လို့ ငါ့စိတ်ထဲမှာ ခံစားမိတယ်..
ငါ့ကို ဖုန်းအမြဲ အရင်ချခိုင်းတတ်တာ မင်းငါ့ကိုသိပ်ချစ်လို့ဆိုတာ ငါသိပါတယ်.. ဒါကိုသိရတော့ ငါ ၀မ်းသာ မိပါတယ်.. မျက်ရည် လည်မိအောင်ကို ၀မ်းသာ ကြည်နူးမိတာပါ.. ဒါပေမဲ့ ငါဟာ ဘယ်သွားသွား ဖုန်းကို ဘယ်တော့မှ မမေ့တာ၊ ဘယ်တော့မှ ဖုန်းကို မပိတ်ခဲ့တာတွေဟာ မင်းချစ်တာထက် ငါက ပိုချစ်လို့ပေါ့ကွယ်.. ဒါပေမဲ့ မင်းကို မသိစေချင်ပါဘူး။ သိအောင်လဲ ကိုယ်မပြောပြခဲ့ပါဘူး.. ဘာလို့လဲ မင်းသိလား .. အချစ်ရေ.. ငါတို့၂ယောက် အတူတူနေကြတဲ့အခါ၊ အသက်တွေကြီးလို့ အချစ်အကြောင်း ပြန်ပြောကြတဲ့အခါ ဒီအကြောင်းတွေကို အဲဒီချိန်ရောက်မှ ငါက မင်းကို ပြောပြချင်လို့ ပါကွယ်..
အိုးးး သူမ အံ့သြတကြီး ရေရွတ်လိုက်မိသည်။ ယုန်ကလေးရေ နင်သိပ်ပြီး ထိန်းချုပ်နိင် လွန်းတာ ပါပဲလားဟာ။ ငါချစ်သလောက် နင်က ငါ့ကိုမချစ်ဘူးလို့ ထင်ခဲ့မိတယ်.. ငါတော့ အထင်တွေမှားခဲ့မိပြီ။ ယုန်ကလေးရေ နင်ဘာဖြစ်နေပြီလဲ ။ နင်ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူးနော်။ နင်ပြောပြမယ့် အချစ်အကြောင်းတွေ ငါနားထောင်ပါရစေအုံးးး။ ယုန်ကလေးရဲ့ အသံက ပို၍တိုးညင်း သွားသည်။
ဒါပေမဲ့ အရူးမလေးရေ.. ငါတို့ကံဆိုးပါတယ်ကွယ် ငါဟာမင်းနဲ့အတူတူ အနာဂတ်မှာ မရှိနိုင်တော့ပါဘူး.. ငါ့ကျောပေါ်မှာ ထုတ်တန်းကြီးတစ်ခုက ပိကျနေခဲ့တာ ၂နာရီကျော်ခဲ့ပါပြီ.. ငါ့ခြေထောက်ပေါ်မှာလဲ အင်္ဂတေတုံးကြီးက ပိလို့... ငါ့ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးလဲ ကြေမွနေပြီထင်ပါတယ်.. နာလိုက်တာလဲ ပြောမပြတတ်အောင်ပါဘဲကွယ်.. သွေးညှီနံ့တွေလဲ ငါ့နှာခေါင်းထဲမှာ နံစော်နေတာပါဘဲ.. ငါသိပါတယ်.. ငါ့ကိုယ်က ထွက်တဲ့ သွေးတွေဘဲဖြစ်မှာပါ.. ငါ့သွေးတွေ ဘယ်လောက်တောင် ယိုစီးကျကုန်ပြီလဲ ငါမသိတော့ပါဘူး.. သေချာပါတယ်.. အချစ်ရယ် ငါဟာမင်းကို နောက်ထပ် အဖော်လုပ်ပေးနိုင်တော့မှာ မဟုတ်သလို၊ ကာကွယ် စောင့်ရှောက် ပေးနိုင်တော့မှာလည်း မဟုတ်ပါဘူးကွယ်..
Voice message ဆုံးသွားသဖြင့် သူမရင် တစ်ခုလုံး ကြေမွမတတ် ခံစားလိုက်ရသည်။ ယုန်ကလေးရယ် နင်သိပ်နာကျင်နေမှာပဲနော် ။ ငါဘယ်လိုလာကယ်ရမလဲ ။ သူမ ဆောက်တည်ရာမဲ့စွာ ဖြစ်နေတော့သည်။ ထိုင်ရာမှထသည်။ အခန်းထဲ ခေါက်တုန့်ခေါက်ပြန် လျှောက်သည်။ ပြန်ထိုင်သည်။ အသက်ရှူရသည်မှာလည်း မဝတော့ပေ။ နောက်ထပ် Voice message တစ်ခုကို တုန်ယင်စွာဖြင့် ဖွင့်သည် ။ ရှိုက်ကာ ရှိုက်ကာ အသက်ရှူသံကို ကြားရပြီးနောက်....
အချစ်လေးရေ.. ငါမင်းအသံကို ပြင်းပြင်းပြပြကို ကြားချင်လိုက်တာကွယ်.. ငါအကြိမ်ကြိမ် ခေါ်ပေမဲ့ ဖုန်းကို ဘာကြောင့်မကိုင်ရတာလဲ.. မင်း ဘယ်ကိုများ ရောက်နေသလဲ.. ထုံးစံအတိုင်း ဖုန်းကို မေ့ထားခဲ့ပြန်ပြီ လားကွယ်.. အရူးမလေး.. ငါ့ အချစ်လေးရေ မင်းကို ခေါ်နေတဲ့ ငါ့အသံကို ကြားရဲ့လားကွယ်.. ငါချမ်းလိုက်တာ… ဒီအပျက်အစီးတွေအောက်မှာ နောက်ထပ် ဘယ်လောက်ကြာကြာ ငါနေနေရဦးမလဲ မသိတာ့ဘူး ခုချိန်မှာ မင်းကို ဖက်ထားခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်များကောင်းမလဲ.. ငါအရမ်းချမ်းနေလို့ပါ..
အချစ်ကလေးရေ မင်းကို ငါချစ်တယ်.. ခုချိန်မှာ သေခြင်းဆိုတာ ငါနဲ့မဝေးတော့ဘူးဆိုတာ သိပေမဲ့ ငါကြောက်ရွံ့နေမိတယ်.. ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ မင်းအနားမှာ ငါမရှိနိုင်တော့မှာ စိုးမိတယ်လေ.. ဒါပေမဲ့ ငါသိပါတယ်.. ငါ မနေရတော့ပါဘူး.. ငါသွားရတော့မှာပါ... အချစ်ရေ.. မင်းအတွက် ငါ စိတ်ပူတယ်.. ငါမရှိတဲ့အခါ မင်းတစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်နေမှာ၊ ကြေကွဲနေမှာ မလိုလားပါဘူး.. ငါမရှိတော့ရင်လေ မင်းဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံး လူတစ်ယောက်ကို ရွေးချယ်ပါ. ငါ့ကိုကတိပေးပါနော်.. ငါ့လို မင်းအပေါ် ကောင်းတဲ့သူ ကြင်နာမဲ့သူ၊ မင်းကို သိပ်ချစ်နိုင်မဲ့သူကို ရွေးပါနော်.. သူ့ကိုလဲ မင်းက ဂရုစိုက်လိုက်ပါ။ သူနဲ့ဆိုရင် မင်းရဲ့ဖုန်းကိုလဲ ဘယ်သွားသွား ယူသွားဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်
အချစ်လေး.. အရူးမလေးရေ.. ငါ.... ငါအသက်ရှုလို့ မဝတော့ဘူး.. .. ငါနှုတ်ဆက်ရတော့ မယ်ထင်တယ် နောက်ဘ၀မှာ ငါတို့ ပြန်ဆုံကြပါစို့နော်. ငါပြောခဲ့ပါရစေဦး အချစ်ဆုံး အရူးမလေးရေ.. မင်းချစ်တာထက် အဆများစွာ ငါက ပိုချစ်ပါတယ်ကွယ်..အိုးးး အချစ်ရယ်...ငါမင်းကို သိပ်ချစ်....
အသံပြတ်တောက် သွားသော ဖုန်းကို လက်က ကိုင်ကာ သူမ ငြိမ်သက်သွားသည်။ ထို့နောက် အသက် မရှုနိုင်လောက်အောင် ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုကြွေးနေမိတော့သည်။ သူမကိုယ်ကို ခွင့်မလွှတ်နိင်ပေ။ သူမပေါ့ဆမိပါသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုန်ကလေးထက်ပိုချစ်တယ် လို့ အမြဲတမ်း ထင်ခဲ့ပေမဲ့ ယုန်ကလေး ခုလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ နှစ်သိမ့်စကားလေး တစ်ခွန်းတောင်မှ ပြောခွင့် မရ လိုက်အောင် ပေါ့လျော့မိတဲ့ သူမအပြစ်က ခွင့်လွှတ်ဖို့မျှပင် မထိုက်တန်လောက်အောင် ဆိုးဝါးလွန်း လှသည်။ နာရီပေါင်းများစွာ မထတမ်း သူမ ငိုကြွေးနေမိသည်။
နောက်တော့ မျက်စိကိုစုံမှိတ်လိုက်ရင်း ယုန်ကလေး ကြားနိုင်အောင် သူမရင်ထဲ အသည်းထဲကနေ အော်ဟစ်လိုက်မိသည်။
“အချစ်ရေ.. နောက်ဘ၀မှာ ပြန်ဆုံကြမယ်.. နောက်ဘ၀မှာလည်း နင့်ကို ငါ အရမ်းချစ်ပါ့မယ်.. ပြီးတော့.. ပြီးတော့ … ဘယ်တော့မှလဲ ဖုန်းကို မေ့မထားတော့ပါဘူး… ငါကတိပေးပါတယ် အချစ်ရယ်.... နင်လိုအပ်ချိန်တိုင်း အဆင်သင့်ရှိနေအောင် ငါဂရုစိုက်ပါ့မယ်... ငါလည်း နင့်ကို သိပ်ချစ်ပါတယ်.. ”
အနာဂါတ်တစ်လျှောက်လုံး သူမ တစ်ယောက်ထဲသာ မွမွကြေသော နှလုံးသား တစ်စုံဖြင့် ရှင်သန်ရပေဦးတော့မည်။
နှစ်ဦးသား ချစ်ကြတဲ့အခါမှာ ဖွင့်မပြောတဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ ဂရုစိုက်မှု၊ ကြင်နာတတ်မှုတို့ကို နားလည်အောင်၊ မြင်တွေ့အောင် ကြည့်တတ်ဖို့လဲ လိုပါသေးတယ်.. အချိန်နှောင်းသွားတဲ့အခါမှ သိလိုက်မယ်ဆိုရင် အရာရာ နောက်ကျလို့ သွားပါပြီ.. ဒါကြောင့် ချစ်သူများအားလုံး ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ အပြုအမူ၊ အကျင့်စရိုက်လေးတွေကို တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး သိနိုင် မြင်နိုင်အောင်၊ ပိုပြီး နားလည်နိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်လှပါတယ်နော်.. တစ်ခါတစ်ရံမှာ ထုတ်ဖော်မပြလို့ အပေါ်ယံကြည့်ယုံနဲ့ မမြင်ရတဲ့ ကိုယ့်အပေါ် ဂရုစိုက် ကြင်နာမှုလေးတွေ ကိုလဲ မြင်အောင်ကြည့်ပြီး တန်ဖိုးထားတတ်အောင်လည်း ကြိုးစား ကြပါဦးစို့နော်.. ချစ်သူ ခင်သူများအားလုံး နားလည်မှုလေးတွေ ကိုယ်စီနဲ့ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြ ပါစေရှင်..
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပို့ပေးလာတဲ့ တရုတ်ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ခုကို ဘာသာပြန် ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်မက တရုတ်စာမတတ်တဲ့အတွက် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ဖတ်ပြပြီး မြန်မာလို ရှင်းပြတာရယ်၊ Google မှာ တရုတ်ကနေ အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်ထား တာရယ်ကို ပေါင်းစပ်ပြီး အတတ်နိုင်ဆုံး ဆီလျှော်အောင် ဖြည့်တွေး ဖြည့်ရေးကာ ဘာသာပြန် ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ရှင်.. မှားယွင်းမှုများ ပါခဲ့ရင် ကျွန်မရဲ့ ချွတ်ချော်မှုသာ ဖြစ်ပါကြောင်း ကြိုတင် ၀န်ခံ ထားပါရစေ... ဒီဇာတ်လမ်းလေး ရေးသားနိုင်ဖို့ ပါဝင်ကူညီ အားဖြည့်ပေးသော သူငယ်ချင်းများကို အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဒီနေရာကနေ ပြောကြားပါရစေရှင်....
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Sunday, March 28, 2010 Sunday, March 28, 2010 Labels: ပျော်ပျော်ပါးပါး ဟာသများ
နေရှင်နယ်မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုမှ ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်ဟာ တောမီးလောင်ကျွမ်းမှုတစ်ခုကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးပေးဖို့ စေခိုင်းခြင်း ခံရပါတယ်.. ပြီးတော့လဲ လောင်ကျွမ်းနေတဲ့ တောမီးအပေါ်ကို လေယာဉ်တစ်စီးနဲ့ လိုက်ပါ ပျံသန်းပြီး ဓာတ်ပုံကို ရိုက်ကူးလာဖို့ ညွှန်ကြားခြင်းခံရပါတယ်…
နေမ၀င်ခင် ၁နာရီလောက်အလိုမှာ ဓာတ်ပုံဆရာဟာ တောမီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ အနီးက လေယာဉ်အဆင်းအတက် လုပ်နိုင်တဲ့ ကွင်းတစ်ခုကို ရောက်ရှိသွားပါတယ်.. ကံကောင်းတာက လေယာဉ်လေးတစ်စီးဟာ ပျံတက်ဖို့ အဆင်သင့် အနေအထားနဲ့ စောင့်ဆိုင်းနေတာကို တွေ့လိုက်ရတော့ ဓာတ်ပုံဆရာလဲ ၀မ်းသာအားရ လေယာဉ်ထဲကို တက်လိုက်ပြီး လေယာဉ်မောင်းသူကို သွားကြစို့လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်.. လေယာဉ်မောင်းသူလဲ လေယာဉ်ကို လေထဲရောက်အောင် ပျံတက်လိုက်ပါတယ်.. လေထဲရောက်ချိန်မှာ ဓာတ်ပုံဆရာက တောမီးနဲ့ အနီးဆုံးနေရာကနေ ခပ်နိမ့်နိမ့်နဲ့ အကြိမ်များများ ပျံပေးပါလို့ လေယာဉ်မောင်းသူကို ပြောလိုက်ပါတယ်..
“ဘာဖြစ်လို့လဲဗျ ” လေယာဉ်မောင်းသူက ပြန်မေးလိုက်ပါတယ်။
“အာ ကျွန်တော်က ဓာတ်ပုံရိုက်ရမယ်လေ… ဓာတ်ပုံဆရာပါဆို ဓာတ်ပုံရိုက်မှာပေါ့ဗျ ” လို့ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်..
“ဘာဗျ.. ဒါဆို ခင်ဗျားက ဒီလေယာဉ်ရဲ့ ပျံသန်းမှုကို ကြီးကြပ် ညွှန်ကြားမဲ့သူ မဟုတ်ဘူးပေါ့.. ကျုပ်က သူ့ကိုစောင့်နေတာဗျ..”
မိန်းခလေးတစ်ယောက်က ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်သွားလျှောက်ပါတယ်.. ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်က သူမကို အင်တာဗျူးလုပ်ပြီး မေးခွန်းတွေ မေးလိုက်ပါတယ်..
သူဌေး။ ။ မင်းမှာ ရည်းစားရှိသလား
မိန်းခလေး။ ။ ဟုတ်ကဲ့.. ရှိပါတယ်..
သူဌေး။ ။ သူက ဒီနိုင်ငံတွင်းမှာဘဲ အလုပ်လုပ်သလား
မိန်းခလေး။ ။ မဟုတ်ပါဘူးရှင်.. ကျွန်မရည်းစားက နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်တာပါ..
သူဌေး။ ။ ကောင်းပြီ. ဒါဆိုရင် ကုမ္ပဏီက မင်းကို အလုပ်မခန့်နိုင်ပါဘူး
မိန်းခလေး။ ။ ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်
သူဌေး။ ။ မင်းကြောင့် နိုင်ငံခြားဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွက် ငွေကုန်ကြေးကျ များမဲ့ အခြေအနေကို ကုမ္ပဏီက ခွင့်မပြုနိုင်ပါဘူး..
(မိန်းခလေးများ အလုပ်အင်တာဗျူး ဖြေတဲ့ခါ နိုင်ငံခြားမှာ ရည်းစားရှိနေရင် ယောင်လို့တောင် မပြောမိစေနဲ့နော်) :) :)
အက်ဘီ နဲ့ အက်စသာ တို့ဟာ နှစ်၄၀ပြည့် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် ဟန်းနီးမွန်း ၂ပတ် ခရီးအတွက် သြစတြေးလျှကို လေယာဉ်နဲ့ ထွက်ခွာလာပါတယ်.. ပျံသန်းလာပြီး လေယာဉ် ခရီးတစ်ဝက်မှာ လေယာဉ်မှူးထံမှ ကြေငြာချက်တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာပါတယ်.. “အမျိုးကောင်းသမီးများနဲ့ အမျိုးကောင်းသားများ ခင်ဗျာ. ကျွန်တော့မှာ သတင်းဆိုးတစ်ခု ကြော်ငြာဖို့ရှိပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့လေယာဉ်ဟာ အင်ဂျင်စက် ချို့ယွင်းသွားတဲ့အတွက် အရေးပေါ် ဆင်းသက်ရပါလိမ့်မယ်.. ကံကောင်းစွာဘဲ ကျွန်တော်တို့ အောက်တည့်တည့်မှာ ကျွန်းကလေးတစ်ကျွန်းကို တွေ့ရပါတယ်.ဒါကြောင့် အဲဒီကျွန်းကို အရေးပေါ် ဆင်းသက်ပါမယ်.. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆက်သွယ်ရေးစံနစ်လဲ ပျက်စီးသွားပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီကျွန်းပေါ်ကို ဘယ်လိုကယ်ဆယ်ရေးမှ ရောက်လာနိုင်စရာမရှိပါဘူး.. ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီကျွန်းပေါ်မှာဘဲ တစ်သက်လုံး နေထိုင်သွားရဖို့ ရှိပါတယ်…”
လေယာဉ်မှူးရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် လေယာဉ်ဟာ ချောချောမွေ့မွေ့ဘဲ ကျွန်းပေါ်ကို ဆင်းသက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်.. ကျွန်းပေါ်ရောက်တဲ့အခါ အက်ဘီဟာ သူ့မိန်းမ အက်စ်သာကို မေးလိုက်ပါတယ်..
“အက်စ်သာ ငါတို့ပေးစရာရှိတဲ့ ရှေ့နေခ ဒေါ်လာ၅၀၀၀ ပေးပြီးခဲ့ပြီလား.. ”
“ဘဏ်မှာ ပေးဖို့ရှိတဲ့ ဘဏ်ကြွေး ဒေါ်လာ ၂၅၀၀၀ ရော ပေးဖို့ သတိရခဲ့ရလား”
“အိုး.. ကျွန်မ မေ့သွားခဲ့တယ်.. မပေးခဲ့ရဘူး. ”
“ငါတို့အကြွေးနဲ့ ၀ယ်ထားတဲ့ အိမ်နဲ့ ကားအတွက်လဲ ဒီလ ငွေ ပေးသွင်းခဲ့ပြီလား”
“အိုး ကျွန်မတောင်းပန်ပါတယ်.. အဲဒါလည်း မပေးခဲ့ရသေးဘူး”
အက်စ်သာရဲ့ စကားအဆုံးမှာ အက်ဘီဟာ အက်စ်သာကို ပွေ့ဖက်လိုက်ပြီး ၀မ်းသာအားရ အနမ်းခြွေလိုက်ပါတယ်..
အက်စ်သာက အထိတ်တလန့် မေးလိုက်ပါတယ်.. “ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ရှင် ရူးနေပြီလား”
“ငါတို့ ပူစရာမလိုတော့ဘူး အကြွေးရှင်တွေ ငါတို့ကို လိုက်ရှာကြလိမ့်မယ် ” တဲ့…
(ဒီတော့ အကြွေးများများ တင်ထားတာ ပိုကောင်းတယ်နော်) :) :)
ကောင်လေးနဲ့ သူ့အဖေဖြစ်သူတို့ဟာ အိမ်ရှေ့ကွပ်လပ်မှာ ဘောလုံးကစားနေကြပါတယ်.. ပျားတစ်ကောင် ပျံနေတာကို မြင်လိုက်တဲ့ကောင်လေးဟာ ပျားကို ကျောက်ခဲတွေ တုတ်တွေနဲ့ ကောက်ပေါက်ပြီး လိုက်လံ မောင်းထုတ်ပါတယ်..
သူ့အဖေက “ သား ဒီလိုမလုပ်နဲ့လေ .. ဒါက ပျားရည် ထုတ်ပေးတဲ့ပျားလေ.... ဒီပျားက သားကို ဘာမှ လုပ်တာမဟုတ်ဘူး... နောက်ကို ဒီလိုမလုပ်ရဘူး.. အခု ပျားကို လုပ်တဲ့ အပြစ်အတွက် သား တစ်ပတ်တိတိ ပျားရည်မစားဘဲ နေရမယ်.. ”
မကြာခင်မှာဘဲ ကောင်လေးဟာ လိပ်ပြာလေးတစ်ကောင်ကို တွေ့ပြန်ရော။ ဒါနဲ့ လိပ်ပြာလေးကို ကျောက်ခဲတွေ တုတ်တွေနဲ့ ပေါက်ပြီး လိုက်လံ မောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်..
ကောင်လေးအဖေက “သား.... လိပ်ပြာဆိုတာ သားကို ဘာမှ လုပ်တာမဟုတ်ဘူး.. ဘာလို့ဒီလို လုပ်ရတာလဲ… ဒီအပြစ်အတွက် သား တစ်ပတ်တိတိ ထောပတ်မစားရဘူး ”
နောက်နေ့မနက်မှာတော့ ထောပတ်လဲမစား ပျားရည်ကိုလဲ မတို့မထိဘဲ ပေါင်မုန့် အလွတ်ကိုသာ ကောင်လေးက စားနေပါတယ်.. အဲဒီချိန်မှာ ဘီဒို တစ်ခုအောက်က ပိုးဟပ်တစ်ကောင် ထွက်လာတာနဲ့ ကောင်လေးရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူက တုတ်နဲ့ ခြောက်ပြီး မောင်းထုတ်ပါတယ်.. အဲဒီတော့ ကောင်လေးက သူ့အဖေကိုပြောလိုက်ပါတယ်..
“အဖေ ဒီကိစ္စ အပြစ်ရှိကြောင်း အမေ့ကို အဖေပြောမလား.. သားဘဲ ပြောလိုက်ရမလား ” တဲ့
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ လမ်းပေါ်မှာ လျှောက်လာရင်း စုတ်စုတ် ပြတ်ပြတ် ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်နဲ့ နံစော်နေတဲ့ အိမ်ခြေမဲ့ သူတောင်းစား အဖွားကြီးတစ်ယောက်က သူမထံမှာ ညစာအတွက် ပိုက်ဆံ အနည်းငယ် စွန့်ကြဲပါလို့ တောင်းပါတယ်..
အမျိုးသမီးက သူမရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ကို ဖွင့်လိုက်ပြီး ၁၀တန် ဒေါ်လာတစ်ရွက်ကို ထုတ်လိုက်ပါတယ်.. ပြီးတော့ “ရှင့်ကိုကျွန်မက ဒီပိုက်ဆံပေးမယ်ဆိုရင် ရှင်က ညစာ ၀ယ် မစားဘဲ ရှော့ပင်းစင်တာတွေမှာ ဈေးဝယ်ထွက်မှာလား ” လို့မေးပါတယ်..
“အိုး မဟုတ်တာ ကျွန်မ ဒီကိစ္စတွေအတွက် ငွေလဲ မဖြုန်းနိုင်ပါဘူး… ရသမျှငွေဟာ ကျွန်မဘ၀ နေထိုင် စားသောက်ရေးအတွက်ပါ ” လို့ အဖွားကြီးက ပြန်ဖြေပါတယ်..
“ဒါဆိုရင် ဒီငွေနဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းအိမ်တွေ လျှောက်သွားမှာလား ” လို့ မေးပြန်ပါတယ်..
“မဖြစ်နိုင်တာ ကျွန်မမှာ လည်စရာအိမ်လဲမရှိဘူး.. မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းလဲ မရှိပါဘူး” လို့ အဖွားကြီးက ပြန်ပြောတယ်..
“ဒါဆိုရင် အလှပြင်ဆိုင်တွေမှာ ရှင့်ဆံပင်တွေ မျက်နှာတွေကို သွားပြင်မှာလား ” လို့ ထိုမိန်းမက မေးပြန်ပါတယ်..
“ ရှင်ရူးနေလား.. ဒီကိစ္စက ကျွန်မနဲ့ ဘာမှမဆိုင်တာ .. ကျွန်မဘ၀မှာ မှန်မကြည့်တာ၊ မပြင်ဆင် မဖြီးလိမ်း ဖြစ်တာတောင် အနှစ် ၂၀ကျော်ခဲ့ပြီ. ” လို့ အဖွားကြီးက စိတ်မရှည်စွာ ပြန်ပြောပါတယ်..
အမျိုးသမီးက “ အိုကေ .. ကောင်းပြီ.. ရှင့်ကို ကျွန်မက ပိုက်ဆံပေးမဲ့အစား ကျွန်မယောက်ျားရယ် ကျွန်မရယ် အတူတူစားမဲ့ ညစာစားပွဲကို ရှင့်ကိုခေါ်သွားမယ်.. ” လို့ပြောလိုက်ပါတယ်..
သူတောင်းစားအဖွားကြီးဟာ အလွန်ကို တုန်လှုပ်သွားပါတယ်.. “ရှင်ရဲ့ယောက်ျားက ကျွန်မလို ညစ်ပတ်ပြီး စုတ်ပြတ် နံစော်နေတဲ့သူနဲ့ ညစာအတူစားရမယ်ဆိုတာ သိရင် ဒေါသ မဖြစ်ဘူးလား” လို့ ပြန်မေးလိုက်ပါတယ်..
“အိုး ဈေးဝယ်မထွက်၊ အလှပြင်ဆိုင်မသွား၊ သူငယ်ချင်းအိမ်တွေ မလည်တဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လိုပုံစံဆိုတာ ဒါမှ သူသိမှာ.. ” တဲ့
( ကဲကဲ.. အိမ်ထောင်ရှိသူ ဦးလေးကြီးများ.. ကိုယ့်မိန်းမ ရှော့ပင်းထွက်တာ၊ အလှပြင်ဆိုင်တွေသွားတာ၊ လည်ပတ်တာတွေ ခွင့်လွှတ်လိုက်ကြနော်) :) :) :)
ပျော်ရွှင်ရယ်မောရင်း သောကများ ပြေပျောက်ကြပါစေရှင်....
အနီရောင် မဟော်ဂနီ စန္ဒရားလေး
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, March 27, 2010 Saturday, March 27, 2010 Labels: ရသစာစုများ
ကျွန်တော်က စိန့်လူးဝစ်မှာရှိတဲ့ စန္ဒရား ကုမ္ပဏီတစ်ခုက အရောင်းဝန်ထမ်းပါ။ ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်တဲ့ စန္ဒရားတွေကို မြို့နယ်အနှံ့ လိုက်လံရောင်းချသလို သတင်းစာတွေမှာလည်း ကြော်ငြာထည့်ပြီး ၀ယ်လိုသူထံက အမှာစာ ရောက်လာရင် မှာတဲ့ သူတွေဆီကိုလည်း လိုက်ပြီး ပို့ပေးပါတယ်.. စန္ဒရား ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ထရပ်ကား အသေးလေးပေါ်တင်ပြီး မှာတဲ့သူရဲ့ အိမ်ကို အိမ်တိုင်ယာရောက် လိုက်ပို့ပေးတာပါ..
မစ်ဇူရီပြည်နယ်ရဲ့ အရှေ့ပိုင်း ဆိုတာ ၀ါဂွမ်းကို အမြောက်အမြား စိုက်ကြတဲ့ ဒေသပါ.. အဲဒီဒေသက သတင်းစာ တွေထဲမှာ ကြော်ငြာထည့်ပြီးတိုင်း ပိုစ့်စကတ်လေးတစ်ခု ကျွန်တော်တို့ဆီကို အမြဲတမ်း ရောက်လာ တတ်ပါတယ်.. အဲဒီပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ စာက ကျေးဇူးပြုပြီး စန္ဒရား အသစ်စက်စက် တစ်လုံးကို ကျွန်မရဲ့ မြေးမလေးအတွက် ပို့ပေးပါ.. အဲဒီ စန္ဒရား အရောင်က အနီရောင်မဟော်ဂနီသားနဲ့ ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်.. တစ်လကို ၁၀ဒေါ်လာနှုန်းနဲ့ လစဉ် ငွေချေပါမယ်.. ဆိုတဲ့ စာတွေကို မသေမသပ်မညီမညာ လက်ရေးတွေနဲ့ ပို့စကတ် တစ်ခုလုံးကို ပြည့်အောင် ထပ်ခါထပ်ခါ ရေးထားပြီး ပိုစ့်စကတ်ရဲ့ အပေါ် မျက်နှာစာတွေမှာပါ ပြည့်အောင် ရေးထားတတ်ပါတယ်..
စဉ်းစားကြည့်ပါဗျာ.. စန္ဒရား အသစ်တစ်လုံးကို တစ်လ ၁၀ဒေါ်လာ ငွေသွင်းမဲ့စနစ်နဲ့ ဘယ်သူကများ အကြွေးရောင်းပေး နိုင်ပါ့မလဲ.. ဘယ်အာမခံ ကုမ္ပဏီကရော ဒီလောက် ငွေလေးကို ကြားဝင်ပြီး အာမခံပေးရဲပါ့မလဲ.. ဒါနဲ့ဘဲ ကျွန်တော်တို့လဲ အဲဒီပိုစ့်ကတ်နဲ့ စာကိစ္စကို လစ်လျှူရှုလိုက်ကြပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ထပ်ခါထပ်ခါ ရောက်လာတဲ့ ပိုစ့်စကတ်ကြောင့် အဲဒီအဖွားအို ဆီကို အရောက်သွားလို့ အခြေအနေကို စုံစမ်းဖို့ ကျွန်တော့်ကို ကုမ္ပဏီက လွတ်လိုက်ပါတယ်..
တစ်မျှော်တစ်ခေါ် ၀ါဂွမ်းစိုက်ခင်းကြီးရဲ့ အလယ်မှာရှိတဲ့ အလုပ်သမား တန်းလျားတစ်ခုက အဖွားအို နေထိုင်ရာ အိမ်ခန်းကလေးဆီကို ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့ အချိန်မှာ မျှော်လင့်တာထက် ကြည့်ကောင်းတဲ့ ရုပ်ရည်ရှိတဲ့ အဖွားကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်.. သူတို့ရဲ့ ယာတဲ အိမ်ခန်း တစ်ခုလုံးဟာ ဖုန်မှုန့်တွေနဲ့ ပေကျံနေပြီး အိမ်ထဲမှာလည်း မွေးထားပုံရတဲ့ ကြက်မျိုးစုံကို ပြေးလွှားဆော့ကစားနေတာကို တွေ့ရပါတယ်.. ကြည့်တာနဲ့တင် သိသာထင်ရှားပါတယ်.. သူမတို့ဟာ ဘယ်အရာကိုမှ အကြွေးနဲ့ ၀ယ်ပြီး ကျေအောင် ပြန်ဆပ်နိုင်မဲ့ပုံ မပေါ်ပါဘူး… ကားမရှိ၊ ဖုန်းမရှိ၊ ၀င်ငွေကောင်းတဲ့ အလုပ် တစ်ခုတစ်လေမှ မရှိတဲ့အပြင် အဖွားအိုရဲ့ ခေါင်းပေါ်က အိမ်အမိုးဟာလည်း အပေါက်အပြဲတွေနဲ့.. အလင်းရောင်တွေကလည်း အမိုးရဲ့ နေရာအနှံ့မှာရှိတဲ့ အပေါက်တွေကနေ ဖြာကျနေတာကို တွေ့ရပါရဲ့.. ၁၀နှစ်လောက် အရွယ်ရှိတဲ့ သူ့ရဲ့မြေးမလေးကတော့ ဖိနပ်မပါဘာမပါနဲ့ အ၀တ်ကလေး ညစ်နွမ်းနွမ်းကို ၀တ်လို့. ကြက်လေးတွေနဲ့အတူ ဆော့ကစားနေပါရဲ့.
ကျွန်တော်က အဖွားအိုကို ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ စန္ဒရား အသစ်တစ်လုံးကို တစ်လကို ၁၀ဒေါ်လာ ငွေချေစနစ်နဲ့ ဘယ်လိုမှ မရောင်းပေးနိုင်ကြောင်း ရှင်းပြပါတယ်.. ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဆီကို စာတွေ ရေးပို့နေတာကို ရပ်ဖို့ ကျွန်တော်က အလေးအနက် ပြောကြားပါတယ်.. ပြောပြီးတော့ ကားမောင်းပြီး သူတို့ယာတဲအိမ်ကလေးကနေ ကျွန်တော် ပြန်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ ရင်ထဲမှာတော့ ခံစားချက်တစ်မျိုးနဲ့ ကျွန်တော့စိတ်တွေ နာကျင်လေးလံလို့ နေပါတယ်… သနားစရာ အဖွားအိုရဲ့ ဆန္ဒကို မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တာ ၀မ်းနည်းဖို့ ကောင်းလှပါတယ်.. အင်း ကျွန်တော်လည်း သနားပေမဲ့ တတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါဘူးလေ..
ဒါပေမဲ့.. ဇွဲကောင်းလှတဲ့ အဖွားအိုဟာ သူ့ဆန္ဒကို အလျှော့မပေးပါဘူး.. ကျွန်တော်တို့ဆီကို သူ့တောင်းဆိုချက်တွေ ရေးထားတဲ့ ပိုစ့်စကတ်တွေ အမြဲတမ်းဘဲ ပို့နေတုန်းပါ.. ပို့တိုင်းလည်း စာထဲမှာရေးထားတာက အနီရောင် မဟော်ဂနီ စန္ဒရား အသစ်စက်စက်ကိုသာ တောင်းဆိုထားပါတယ်.. စိတ်မကောင်းစရာ တစ်ခုက သူမဟာ တစ်လကို ၁၀ဒေါ်လာပေးချေဖို့ ဘယ်တော့မှ မပျက်ကွက်ပါဘူး ဆိုတာကို ကျိန်တွယ်ပြီး ကတိပေးထားတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ကုမ္ပဏီ အနေအထားကတော့ သူမကို ရောင်းချဖို့ စိတ်ကူး မရှိခဲ့ပါဘူး… ဒီကိစ္စကို ဘယ်သူကမှ ဂရုမထားတော့သလို ဘယ်သူကမှလည်း အလေးအနက် ရှိမနေကြတော့ပါဘူး.. သို့ပေမဲ့ အဖွားအိုကတော့ ပိုစ့်စကတ်လေးတွေ ပို့မြဲပို့ဆဲပါ။
ဒီလိုနဲ့ နောက် ၃နှစ်အကြာမှာ ကျွန်တော်ဟာ စန္ဒရား ထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီလေးတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ.. ကျွန်တော့ ကုမ္ပဏီရဲ့ စန္ဒရားတွေကို သတင်းစာမှာ ကြော်ငြာတဲ့ အခါမှာတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်က ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီမှာ ရောက်လာတဲ့ ပိုစ့်စကတ်လေးအတိုင်း အနီရောင် မဟော်ဂနီ စန္ဒရားကို ပို့ပေးဖို့ တောင်းဆိုတဲ့စာ ရောက်လာပြန်ပါတယ်.. ကျွန်တော်ကရော ဘယ်လိုလုပ် တစ်လ ၁၀ဒေါ်လာနဲ့ စန္ဒရားတစ်လုံးကို ရောင်းပေးနိုင်ပါ့မလဲ.. ဟိုးအရင်ကလိုဘဲ ကျွန်တော်လဲ ဒီစာကိစ္စကို လစ်လျှူရှုထားလိုက်ပါတယ်.. ပိုစ့်စကတ်လေးနဲ့ စာတွေကတော့ အကြိမ်ပေါင်း မြောက်မြားစွာ ရောက်မြဲ ရောက်လာဆဲပါ…
ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့မှာတော့ တစ်စုံတစ်ရာရဲ့ တွန်းအားတစ်ခုကြောင့် အဲဒီနေရာလေးကို ကျွန်တော့်ရဲ့ ထရပ်ကား အသေးလေးနဲ့ ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်. ကားပေါ်မှာတော့ အနီရောင် မဟော်ဂနီ စန္ဒရားလေးကို တင်လို့ပေါ့… ကျွန်တော်ဟာ အင်မတန်မှ ဆိုးဝါးတဲ့ စီးပွားရေး ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုကို ချခဲ့မိပြီဆိုတာ သိပေမဲ့လို့ စန္ဒရားကို သယ်ဆောင်လို့ အဖွားအိုဆီကို ရောက်သွားမိခဲ့ပါပြီ.. ပြီးတော့ အဖွားအိုကို ကျွန်တော်က ရှင်းပြပါတယ်.. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အာမခံပြီး စာချုပ်တစ်ခုကို ယူလာပါတယ်.. အဲဒီစာချုပ်မှာ စန္ဒရားကို ကျွန်တော့အနေနဲ့ အကျိုးအမြတ် လုံးဝမယူဘဲ ရောင်းပေးမှာ ဖြစ်ပြီး အဖွားအိုဘက်က တစ်လ၁၀ဒေါ်လာ နှုန်းနဲ့ ၅၂ လ တိတိ ငွေသွင်းဖို့ စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ပါဝင်ပါတယ်.. အဖွားအိုကလည်း ကျေးဇူးတင်စွာနဲ့ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ လက်ခံသဘောတူပါတယ်.. စန္ဒရားကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အဖွားအိုရဲ့ တဲအိမ်မှာ အိမ်အမိုး အပေါက် အနည်းဆုံး ဖြစ်နိုင်မဲ့ နေရာကို ရွေးချယ်ပြီး နေရာချပေးခဲ့ပါတယ်.. အဖွားအိုနဲ့ သူရဲ့ မြေးမလေးကို စန္ဒရားပေါ် ကြက်တွေ တက်မဆော့စေဖို့ သတိပေးစကား ပြောခဲ့ပါတယ်.. ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ သေချာ သိနေခဲ့တာက ကျွန်တော်ဟာ စန္ဒရား အသစ်စက်စက် တစ်လုံးကို အလဟဿ ဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်မိပြီ ဆိုတာပါဘဲ…
သို့သော်လည်း ငွေချေတဲ့အချိန်မှာတော့ သဘောတူ ကတိပြုထားတဲ့အတိုင်း အဖွားအိုဘက်က တစ်လမှ မပျက်ကွက်ခဲ့ပါဘူး.. တစ်ချို့လတွေမှာ ၁၀ဒေါ်လာပြည့်ဖို့ ငွေအကြွေစေ့တော်တော်များများ ပါဝင်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်.. မယုံနိုင်စရာပါ .. ၅၂လတိတိ မပျက်မကွက် ပေးချေသွားခဲ့တဲ့ အင်မတန်ကတိတည်တဲ့ အရောင်းအ၀ယ်လေးတစ်ခုပါ.. ကျွန်တော် မထင်မှတ်ထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခုပါဘဲ.. ဒီလို ငွေအကြေ ချေနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာ ယုံချင်စရာတောင် မရှိခဲ့ပါဘဲနဲ့.. အဖွားအိုဟာ မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်သွားခဲ့ပါပြီ။
နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကြာတဲ့အခါမှာတော့ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေက ကျွန်တော့ အာရုံမှာ မှေးမှိန် ပျောက်ကွယ် သွားခဲ့ပါပြီ။ တစ်နေ့မှာ ကျွန်တော် မဲမ်ဖစ်ကို စီးပွားရေးကိစ္စတစ်ခုနဲ့ ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ တည်းခိုတဲ့ ဟိုတယ်မှာဘဲ ညစာစားပြီးတော့ ဟိုတယ် ဧည့်ခန်းကြီးထဲက ဘားကောင်တာမှာ ထိုင်ပြီး အပျင်းပြေ တစ်ခုခု သောက်နေတုန်းမှာ အင်မတန်မှ သာယာငြိမ့်ညောင်းပြီး လက်ရာကောင်းလှတဲ့ စန္ဒရားသံလေးတစ်ခုကို ကျွန်တော် ကြားလိုက်ရပါတယ်.. ဘေးဝန်းကျင်ကို လိုက်လံရှာဖွေ ကြည့်မိတဲ့အခါမှာတော့ ငယ်ရွယ်လှပပြီး ချစ်စရာ မိန်းခလေးတစ်ယောက်ဟာ သိပ်ကိုကောင်းမွန်ပြီး အဆင့်အတန်းမြှင့်လှတဲ့ စန္ဒရားတစ်လုံးကို တီးနေတာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်..
စန္ဒရား ၀ါသနာပါတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အသိစိတ်အရ သူမရဲ့ စန္ဒရားလက်သံဟာ အရည်အသွေး ကောင်းမွန် မြှင့်မားလှတာကို အသိအမှတ် မပြုဘဲ မနေနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်မိပါတယ်.. ဒါနဲ့ သူကလေးရဲ့ လက်သံကို ကောင်းကောင်းကြားရနိုင်မဲ့ စန္ဒရားခုံနဲ့ အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ စားပွဲကို သောက်လက်စ ခွက်ကလေး လက်ကကိုင်ပြီး ရွေ့လာမိပါတယ်. ကျွန်တော့်ကို မြင်တွေ့သွားတဲ့ မိန်းမငယ်လေးဟာ ကြည်လင်လှိုက်လှဲစွာ ပြုံးပြတဲ့အတွက် ကျွန်တော် အတော့်ကို အံ့သြသွားမိပါတယ်.. သူမရဲ့ တေးသွားပြီးဆုံးလို့ ခနနားတဲ့အချိန်မှာ မိန်းကလေးဟာ ကျွန်တော့်စားပွဲကို ရောက်လာပါတယ်..
ကောင်မလေးက ကျွန်တော့်ကို “မင်္ဂလာပါ.. ရှင် ကျွန်မရဲ့အဖွားကို စန္ဒရား ရောင်းပေးခဲ့ဖူးတဲ့သူ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လားဟင်?” လို့ နှုတ်ဆက်ရင်းက မေးလိုက်ပါတယ်… ရုတ်တရက်တော့ ကျွန်တော့မှတ်ဥာဏ်က အလုပ်မလုပ်ပါဘူး.. မိန်းခလေး ပြောတာကို နားမလည်တာနဲ့ ပြန်ရှင်းပြဖို့ တောင်းဆိုတော့ ကောင်မလေးက လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်၂၀က အကြောင်း ပြန်ပြောင်းလို့ ပြောပါတော့တယ်.. ဒီတော့မှ ကျွန်တော် မှတ်မိလိုက်ပါပြီ. အိုး.. ဘုရားရေ… ဒီကောင်မလေးတဲ့လား.. လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၂၀လောက်က ဖိနပ်မပါတဲ့ အ၀တ်ကလေး ညစ်နွမ်းနွမ်းနဲ့ ကောင်မလေးဟာ ဒီလိုလက်သံနဲ့ စန္ဒရားကို တီးခတ်နိုင်သူ ဖြစ်လာခဲ့တယ် တဲ့လား..
ကောင်မလေးက သူမရဲ့ နံမည်က အဲလစ်ဇ် ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ သူမငယ်စဉ်က စန္ဒရား သင်တန်းတက်ဖို့ ငွေကြေး မတတ်နိုင်တဲ့အတွက် သူမရဲ့အဖွားက ရေဒီယို နားထောင်စေပြီး စန္ဒရားကို လေ့ကျင့်ခဲ့ရကြောင်း၊ ပြီးတော့ စန္ဒရား တီးပြခွင့်ရဖို့ အတွက် အိမ်နဲ့ ၂မိုင်ကျော်လောက်ဝေးတဲ့ ဘုရားကျောင်းကို မြေးအဖွား ၂ယောက်သား လမ်းလျှောက်ပြီး သွားခဲ့ရတာတွေ၊ ထို့နောက် သူမတက်နေတဲ့ကျောင်းက စန္ဒရားတီးပြိုင်ပွဲတွေမှာ စပြီး ဆုများစွာရရှိခဲ့တာတွေ၊ ဂီတနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ ကျောင်းတွေမှာ တက်ရောက်ခွင့် ပညာသင်ဆု ရခဲ့တာတွေ၊ နောက်ဆုံး အခု မဲမ်ဖစ်မှာ ရှေ့နေတစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး အခုတီးနေတဲ့စန္ဒရားလေးကို သူ့အမျိုးသားက သူမအတွက် လက်ဆောင်ဝယ်ပေးကြောင်း စသဖြင့် ဇာတ်လမ်းစုံကို ပြောပြပါတယ်..
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ တစ်စုံတစ်ရာရဲ့ စေ့ဆော်ချက်ကြောင့် သိချင်စိတ်လေးတစ်ခု ဖြစ်လာတာနဲ့ “အဲလစ်ဇ်..... ဒီနေရာက မှောင်နေတော့ သဲသဲကွဲကွဲ မမြင်ရဘူး.. သမီးရဲ့ စန္ဒရားက ဘာအရောင်လေးလဲ ” လို့မေးလိုက်ပါတယ်..
“ မဟော်ဂနီ အနီရောင်လေ.. ဦးလေးက ဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲဟင်”
ကျွန်တော် စကားပြန်မပြောနိုင်လောက်အောင် ဆွံ့အသွားမိတယ်.. ဘာမှကို ပြန်မဖြေနိုင် လိုက်နိုင်ပါဘူး.. လည်ချောင်းတွေဟာ ချက်ခြင်းဘဲ ခြောက်သွေ့ အက်ကွဲ လာတယ်.. ဒီကောင်မလေးဟာ သူ့အဖွားဖြစ်သူရဲ့ အကြီးမားဆုံး လိုအင်ဆန္ဒ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အနီရောင် မဟော်ဂနီစန္ဒရား အကြောင်း ကောင်းကောင်းသိပါရဲ့လား.. မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် စိတ်အား ထက်သန် ပြင်းပြမှုနဲ့ အကြိမ်ကြိမ်အဖန်ဖန် မလျှော့သော ဇွဲလုံ့နဲ့ သူမလိုချင်တဲ့ အနီရောင် မဟော်ဂနီ စန္ဒရားကို မရမချင်း စာတွေ အကြိမ်ကြိမ် ရေးပို့ခဲ့တဲ့ သူမအဖွားရဲ့ စိတ်ဆန္ဒ အားကောင်းမှုကို ဒီကလေးမဟာ သိခဲ့ပါရဲ့လား..
ပြီးတော့ ဆင်းရဲနုံချာလှပြီး ဖိနပ်လေးတောင် မစီးနိုင်တဲ့ စုတ်ပြတ် နွမ်းဖတ်နေတဲ့ ကလေးမလေးဟာ လက်ဖျားခါရလောက်အောင် ပြောင်မြောက်ထူးချွန်တဲ့ ပညာရှင် တစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀နဲ့အတူ သိမ်မွေ့လှပတဲ့ မိန်းခလေးတစ်ယောက် ဖြစ်လာအောင် ဘယ်လို တွန်းအားတွေ၊ ခွန်အားတွေနဲ့များ ဖြစ်တည်လာခဲ့ပါသလဲ.. ကောင်မလေးဟာ သူဘယ်လို တွန်းအားတွေကြောင့် ဒီလိုဖြစ်လာတယ် ဆိုတာ သူမကိုယ်တိုင် သိချင်မှ သိပါလိမ့်မယ်.. ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် သိနေခဲ့တယ်.. သေသေချာချာကို သိနေခဲ့တာပါ.. ဒါဟာ အဖွားအိုရဲ့ ပြင်းပြတဲ့ စိတ်ဆန္ဒနဲ့ ကြိုးပမ်းချက်ကြောင့်သာ မဟုတ်ခဲ့ရင် ဒီမိန်းခလေးဟာ ဒီလို ထူးချွန်သူတစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး.. စေတနာမေတ္တာ ကြီးမားလှပြီး ဇွဲကောင်းလှတဲ့ အဖွားအိုဟာ ချီးကျူးစရာ ကောင်းလောက်အောင် သူမရဲ့မြေးကို လိုသလို ပုံသွင်းပြီး အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင် သွားနိုင်စေခဲ့တယ်.. အဖွားအိုဟာ သူမမြေးမလေး ခုလို အောင်မြင်နေတာ၊ လူလားမြောက်နေတာကို မြင်တွေ့ခွင့်ရော ရသွားပါရဲ့လား.. အဖွားအိုရဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ မေတ္တတရားကို ကျွန်တော်ကတော့ ကောင်းကောင်းကြီး မြင်တွေ့လိုက်မိပါရဲ့…
နောက်ဆုံးတော့ တဒင်္ဂ ပျောက်ရှသွားတဲ့ ကျွန်တော့ အသံကို ကျွန်တော် ပြန်ရှာတွေ့ပြီး လည်ချောင်းကို တစ်ချက် ရှင်းလိုက်ရင်းက “ ဘာမှတော့ မဟုတ်ပါဘူး.. သိချင်လို့ မေးကြည့်တာပါ” လို့ သူမရဲ့ အမေးကို ပြန်ဖြေလိုက်ရပါတယ်.. “ အဲလစ်ဇ် ကို ခုလို တွေ့ရတာ ဂုဏ်ယူလိုက်တာကွယ်.. အင်း.. ဦးလေး ခနလောက် အခန်းကို ပြန်လိုက်ဦးမယ်နော်.. ” လို့ပြောပြီး စားပွဲကနေ အမြန် ထလာခဲ့ရပါတယ်.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ယောက်ျားရင့်မာကြီး တစ်ယောက်က လူပုံလည်မှာ မျက်ရည်ကျဖို့ ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မသင့်တော်ဘူး မဟုတ်လား. ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ လူတွေမှာလည်း ဖြစ်ချင်လွန်းအားကြီးတဲ့ ဇွဲနဲ့ လုံ့လစိတ်သာ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိမယ် ဆိုရင် စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ အမှန်တကယ် ဖြစ်မြောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် လက်တွေ့ သိလိုက်ရပါပြီ..
အဖွားအိုတစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာတရားနဲ့၊ ချီးကျူးဖွယ် စိတ်အားထက်သန်မှု၊ ဇွဲလုံ့လ ကောင်းမှုတို့ကြောင့် မိန်းမငယ်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင် အကောင်အထည် ဖော်လာနိုင်ခဲ့တာ လေးစားအားကျဖွယ်ဘဲ မဟုတ်ပါလားရှင်။ ဒီဇာတ်လမ်းလေးကနေ အလွယ်တကူနဲ့ စိတ်အားမလျှော့ဖို့နဲ့၊ ဘယ်အရာကိုမဆို ဇွဲလုံ့လကောင်းကောင်း၊ စိတ်အား ထက်ထက်သန်သန်နဲ့ လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ အားလုံး တစ်နေ့နေ့တော့ မလွဲမသွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အသိတရားလေးကို ဖော်ပြနေပါတယ်..
Chicken Soup for the Grandparent's Soul မှ Joe Edwards ရဲ့ The Red Mahogany Piano ကို ဘာသာပြန် ခံစားရေးဖွဲ့ပါသည်။
လိုအင်ဆန္ဒများ အားလုံး ပြည့်ဝကြပါစေရှင်..
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, March 24, 2010 Wednesday, March 24, 2010 Labels: လူမှုရေးရာ
လောကကြီးမှာ နေထိုင်သွားလာလှုပ်ရှားရင်း လူအများနဲ့ သဟဇာတ ဖြစ်အောင် နေထိုင်ရတာ တကယ်တမ်းတော့ မလွယ်လှပါဘူးနော်.. လူတိုင်းဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အကြိုက်လဲ ထပ်တူမကျနိုင်၊ အတွေးအခေါ် အမြင်ချင်းလဲ အခြအနေပေါ် မူတည်ပြီး အများကြီးကွဲပြားသွားနိုင်ပါတယ်.. တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ရေရှည်မှာ အဆင်ပြေပြေ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်ဖို့ ခက်တော့ ခက်ခဲပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှိမှာပါ.. ကျွန်မ ဖတ်ထားဖူးတဲ့ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ အဆင်ပြေပြေ နေထိုင်နည်း အချက်အလက် အချို့ကို ဒီစာမျက်နှာပေါ်မှာ ပြန်လည်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်.. အချက် အားလုံးကို မလုပ်နိုင်ရင်တောင်မှ တစ်ချို့ဟာလေးတွေကို လိုက်လုပ်နိုင်တယ် ဆိုရင်တောင် အတော်လေးတော့ အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်.. တစ်ချို့သော အချက်ကလေးတွေဟာ မိမိ ကိုယ်တိုင်အတွက် အများကြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်…
၁. များများပြုံးပါ.. သင့်အပြုံးဟာ တစ်ဘက်လူကို ရွှင်လန်းစေလောက်တဲ့ အထိနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ပြုံးရယ်ပါ။ များများ ပြုံးရယ်ခြင်းဟာ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ကြွက်သားများအတွက် အကောင်းဆုံး လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလဲ ဖြစ်ပါတယ်.. ထို့ကြောင့် များများ ပြုံး၊ များများ ရယ်မောကြပါ။
၂. မှန်ကန်တဲ့ စားသောက်မှုကို ရွေးချယ်ပါ။ ပြုပြင်ဖန်တီးထားသော အစားအသောက်များထက် ကျန်းမာရေး အတွက် သင့်တော်မဲ့ သဘာဝ အသီးအနှံများကို များများစားပါ.. အသီးအရွက် များများ စားခြင်းအားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ကို ကျဆင်းစေပြီး ကျန်းမာရေးကို အကောင်းဆုံး အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။
၃. လေ့ကျင့်ခန်း တစ်ခုခုကို နေ့စဉ် ပုံမှန် လုပ်နိုင်ရန်ကြိုးစားပါ.. ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန် ကျဆင်းဖို့အတွက်သာ မက သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းမွန်၍ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အဆိပ် အတောက်များကို ပြေပျောက်စေနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် အလေ့အကျင့်ကောင်းတစ်ခုလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၄. ရေများများသောက်ပါ။ အရောင်ပါသော ဖျော်ရည်အမျိုးမျိုးထက် သဘာဝရေကို များများသောက်ခြင်းက အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်.. ရေမှာ သကြားဓာတ်နဲ့ အခြား ဓာတုပစ္စည်းများ မပါဝင်သဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
၅. တစ်ခုခုကို လေ့လာသင်ယူပါ.. စာများများဖတ်ပါ.. မိမိ၏ အချိန်နှင့် ငွေကြေးကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချခြင်းသည် မိမိဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။
၆. သူတစ်ပါးကို ချစ်ခင်ကြင်နာပါ..ဂရုစိုက်အလေးထားပါ.. ထိုအရာများသည် ဘ၀အတွက် စိတ် အာဟာရလေးများ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
၇. မိမိယုံကြည်ရာ ဘာသာတရား၏ အဆုံးအမကို ခံယူပါ။ ဘာသာတရားသည် မိမိစိတ်ကို ကြည်လင်စေသည်.. မိမိ ယုံကြည်ချက်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်စွမ်းပါတယ်။
၈. မိမိချစ်ခင်သူများကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးကြောင်းကို ပါးစပ်မှ မကြာခန ဖွင့်ပြောပါ.. ချစ်ခင်ကြောင်းကို အမူအရာများ ပြသပါ.. မေးမှ ပြောချင်းထက် မိမိချစ်ခင်သူတို့သည် သင့်ထံမှ ဂရုစိုက်မှု အလေးထားမှုတို့ကို မကြာခနကြားချင်သူ မြင်ချင်သူများဖြစ်ကြောင်း သတိရပါ။
၉. ထိုသူတို့နှင့် မကြာခန စကားလက်ဆုံပြောနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ.. တစ်ယောက်အကြိုက် တစ်ယောက် ပိုမိုသိလာနိုင်သလို သံယောဇဉ် ပိုမို ခိုင်မာစေသော အကြောင်းတရားတစ်ခုလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀. အချိန်ရတိုင်း အားခြားသူများနှင့် နွေးထွေးစွာ စကားပြောဆိုပါ။ အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်သူများ ထံမှ အတွေ့အကြုံများ၊ ဗဟုသုတများ ဖလှယ်ရယူခြင်းဖြင့် သင့်အတွက် အကျိုးရှိစေနိုင်ပါတယ်။
၁၁. မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းအိမ် လည်ပတ်သွားလာပါ.. အဝေးရောက်နေသူများထံ အမှတ်တရ၊ သတိတရ ကဒ်ကလေးများပို့ခြင်း၊ စာရေးဆက်သွယ် မကြာခနလုပ်ပါ။ ဖုန်း မကြာခန ဆက်ပါ။ မိမိက သတိတရ ရှိကြောင်း၊ အမှတ်ရကြောင်းကို ထိုသူများ သိပါစေ။
၁၂. မိမိနှင့် သိသူဖြစ်စေ မသိကျွမ်း မရင်းနှီးသူများဖြစ်စေ အတတ်နိုင်ဆုံး အပြုံးလေးကို လက်ဆောင်ပေး နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ ပွင့်လင်းဖော်ရွေသော ချိုသာ ကြည်လင်သော အပြုံးတစ်ချက်သည် သင့်အား အများနှင့်မတူ တစ်မူခွဲထွက်စေသော အားသာချက်တစ်ရပ် ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
၁၃. အိမ်သူအိမ်သားများကို ကူညီပါ.. မိမိအိမ်တွင် ချက်ပြုတ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း၊ အိမ်သူအိမ်သားများ မအားသောအချိန်များတွင် သူတို့မတတ်နိုင်သည်များကို ကူညီ လုပ်ကိုင်ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပါ။
၁၄. ပျော်ပျော်ရွှင် နေထိုင်ကျင့်ကို ကြိုးစားလေ့ကျင့်ပါ။ အရာရာကို အကောင်းမြင်စိတ်ဖြင့် ကြည့်နိုင်လျှင် သင်ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်ချမ်းသာမည်.. သူတစ်ပါးအတွက်လဲ အဆင်ပြေမည် ဖြစ်ပါတယ်။
၁၅. ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့် မှန်ကန်သော စကားကိုသာ ပြောပါ။ စကားများများပြောပြီး လိမ်ညာ စကားလုံး သုံးတတ်သူများကို မည်သူကမှ လေးစားလိုစိတ်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ထိုသူများအား လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းမှ အလိုလို ဘေးဖယ်ခံရတတ်ပါတယ်။
၁၆. အချိန်ရလျှင် အဖွဲ့အစည်း လှုပ်ရှားမှုများ၊ ပရဟိတ လုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်လှုပ်ရှားပါ။ အကူအညီအမှန်တကယ် လိုအပ်နေသူများကို ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ကူညီပါ။ အားပေးနှစ်သိမ့်ပါ။
၁၇. မိမိ ပါတ်ဝန်းကျင်အား တတ်နိုင်သလောက် အကျိုးပြုနိုင်ရန်ကြိုးစားပါ .. ဥပမာ သစ်ပင်စိုက်ခြင်း၊ ပန်းအလှပင်စိုက်ခြင်း၊ မိမိတစ်ပိုင်တစ်နိုင် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း။
၁၈. ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်သော ပစ္စည်းများကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချပါ.. ပလပ်စတစ်၊ စက္ကူ အစရှိသည် တို့သာမက မိမိ အတွက် မလိုအပ်သော အ၀တ်အစား အသုံအဆောင်များကို အခြား လိုအပ်သူများ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအား ပြန်လည်မျှဝေ လှူဒါန်းပေးပါ။
၁၉. ကမ္ဘာကြီး ပိုမို ပူနွေးလာသော အကြောင်းအချက်များကို ဖော်ထုတ်ရှာဖွေခြင်း၊ ကာကွယ်ဖြေရှင်းခြင်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ပါ။
၂၀. အရာရာကို သတိနှင့်လုပ်ဆောင်ပါ.. ဖြစ်တတ်သော အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင် တတ်သည့် အလေ့အကျင့်ကို မွေးမြူပါ။
၂၁. ကောင်းမွန်သာယာသော လုပ်ငန်းခွင်၊ ပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်တည်လာရန်အတွက် မိမိဆက်စပ် ပါတ်သက်ရာ အဖွဲ့အစည်း အသိုင်းအ၀ိုင်းတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ။
၂၂. လွယ်လွယ်နှင့် ခွင့်လွှတ်တတ်သူ၊ နားလည်စာနာစိတ်ထားတတ်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားပါ.. သူတစ်ပါးကို နားလည်ခွင့်လွှတ်တတ်သူသည် ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်၏ ချမ်းမြေ့ခြင်းကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
၂၃. မိမိ၏ ၀င်ငွေ ထွက်ငွေကို စနစ်တကျ စီမံ ခန့်ခွဲတတ်သူဖြစ်ပါစေ.. အမှန်တကယ် လိုအပ်သော ကိစ္စမျိုးတွင်သာ ငွေကို သုံးစွဲတတ်အောင် စနစ်ကျသူ ဖြစ်ပါစေ။
Anolia Orfrecio Facun ရဲ့ The Ways to MakeaDifference to Yourself and Others ကို ဘာသာပြန်ပါသည်။
အားလုံးဘဲ မိမိလက်ရှိ လူမှု ပါတ်ဝန်းကျင်၊ လုပ်ငန်းခွင်များနှင့် အဆင်ပြေပြီး ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Tuesday, March 23, 2010 Tuesday, March 23, 2010 Labels: ဆောင်းပါး
True Love (Elizabeth Arden)
ရေမွှေးတွေကို စွဲစွဲလမ်းလမ်း နှစ်သက်တတ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရေမွှေးအကြောင်း တစ်စေ့ တစ်စောင်းလေး ရေးပြချင်ပါသေးတယ်.. သင်သုံးစွဲနေတဲ့ ရေမွှေးဟာ သင့်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးဖြစ်သလို.. သင်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကိုလဲ ဖော်ပြနိုင်တဲ့ အသုံးအဆောင်လေး တစ်ခုအဖြစ် အရေးပါပါတယ်။ သုံးစွဲလေ့ရှိတဲ့ အနံ့လေးကို လိုက်ပြီး တစ်ချို့သောသူတွေက ဒီအနံ့ကို နှစ်သက်သူက ဘယ်လိုစိတ်နေစိတ်ထားရှိသူ၊ ဘယ်လို စရိုက်မျိုး ရှိတတ်သူရယ်လို့ ခန့်မှန်းတတ်ကြပါတယ်.. အလုံးစုံ မမှန်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင် တစ်စိတ်တစ်ဒေသအားဖြင့်တော့ မှန်တတ်ပါတယ်. ရေမွှေးသုံးစွဲတဲ့ အလေ့အထဟာ ခုခေတ်မှသာ မဟုတ်ဘဲ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း များစွာကတည်းက သုံးစွဲခဲ့ကြောင်း ရာဇ၀င် တွေမှာပါ အထောက်အထားများနဲ့ တွေ့ရပါတယ်။
Wrapped With Love Hilary Duff ( EA Fragrances Co.,)
ရေမွှေးကြိုက်တတ်သူများ အနေနဲ့ ရေမွှေး မဆွတ်ဖြန်းမိတဲ့ နေ့တွေမှာ တစ်ခုခုလိုနေတဲ့ ခံစားချက်မျိုး သိသိသာသာ ခံစားဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ရေမွှေးဟာ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုပေးနိုင်တဲ့အရာ လို့လည်း လက်ခံကြပါတယ်။ နေသိပ်ပူတဲ့ နေ့မျိုးတွေမှာ အပြင်ကို မထွက်မဖြစ် ထွက်ကြရပြီဆိုရင် နေပူဒဏ်ကြောင့် ချွေးထွက်များတဲ့အခါ ရေမွှေး ဆွတ်ဖြန်းလာရင်တော့ မသိသာပေမဲ့.. ကိုယ်နံ့ပြင်းသူများ အတွက်တော့ အခက်တွေ့စရာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်… ကိုယ့်ဆီက ချွေးနံ့က သိပ်များ ဆိုးဝါးနေပြီလား. ဒီအနံ့ကြောင့် အများတကာ နှာခေါင်းရှုံ့နေပြီလား ရယ်လို့ မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်စိတ် နည်းတတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့သောသူများက ရေမွှေး မကြိုက်ဘူး၊ မသုံးတတ်ဘူးလို့ ပြောကြတာ တွေ့ဖူးပါတယ်.. အနံ့နဲ့ ဓါတ်မတည့်သူများ အနေနဲ့ မသုံးကြတာ ဘာမှမပြောလိုပေမဲ့ မကြိုက်လို့ မသုံးသူများ၊ ရေမွှေးကို မလိုအပ်ဘူးလို့ ထင်နေသူများကိုတော့ ရေမွှေးဟာ သင့်အတွက် အနီးကပ် ဆွဲဆောင်ပေးမဲ့ သင့်ချစ်သူသင့်ကို ပိုချစ်လာအောင် စွမ်းဆောင်ပေးမဲ့ အစွမ်းထက် ဆေးတစ်ခွက်လို့ ညွှန်းလိုက်ပါရစေရှင်။
5th Avenue (Elizabeth Arden)
လူတစ်ယောက်ယောက် ကိုယ့် နံဘေးကနေ ဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာ ရေမွှေးမသုံးစွဲသူ ဖြစ်ခဲ့ရင် အဲဒီလူ ကိုယ့်ဘေးက ဖြတ်သွားတာ အမှတ်တမဲ့ ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ သိပ်ကို ဆွဲဆောင်မှု ကောင်းလှတဲ့ ရနံ့လေးနဲ့ ရေမွှေးကို ဆွတ်သူ တစ်ယောက်သာ ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် သူဆွတ်ထားတဲ့ ရေမွှေးရဲ့ ဆွဲငင်အားကြောင့် သမင်လည်ပြန် သော်လည်းကောင်း၊ ရေမွှေးနံ့လေးက မွှေးလိုက်တာ ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်လေးဖြစ်ဖြစ်တော့ ချမိပြီး မှတ်မှတ်ထင်ထင် သတိထားမိလိုက်ကြမှာပါ.. အမြဲတစေ လူအများကြား လှုပ်ရှား သွားလာရသူများ၊ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံမှု နယ်ပယ်ကြီးသူများ၊ ပွဲလမ်း သဘင် ဆင်ယင်ကြသူများ အားလုံး ရေမွှေးကို သုံးစွဲသင့်ပါတယ်... ဒါမှလဲ လူတွေကြားထဲမှာ မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုမပျက် အနေမခက်ဘဲ နေ့တစ်နေ့ကို ကြည်လင်စွာ ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
မိန်းခလေး အတော်များများမှာ ရေမွှေးမကြိုက်တဲ့သူ အင်မတန် ရှားပါးပါတယ်.. လက်ဆောင်ပေးလို့ အသင့်တော်ဆုံး အရာဟာလည်း ရေမွှေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်... လက်ဆောင်ပေးဖို့ စဉ်းစားရခက်နေရင် သိပ်မစဉ်းစားပါနဲ့.. ရေမွှေးလေးတစ်ပုလင်းသာ ပေးလိုက်ပါ.. သို့သော် အနံ့ပြင်းထန်လွန်းသော ရေမွှေးကိုတော့ ရှောင်သင့်ပါတယ်. ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ ပျံ့ပျံ့သင်းသင်းလေးမွှေးတဲ့ ရနံ့မျိုးကသာ လူတိုင်း နှစ်သက် စွဲမက်တတ်ကြပါတယ်. ခုခေတ်မှာ ရေမွှေးကို အမျိုးသမီးများသာမက အမျိုးသားများပါ သုံးစွဲလာကြပါပြီ ရေမွှေးဈေးကွက်ထဲမှာ For Man ဆိုတဲ့ အမှတ်အသားတွေ များလာတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရေမွှေးဟာ အမျိုးသမီး အမျိုးသား လူတိုင်းအတွက် အရေးပါလာတယ် ဆိုတာ ထင်ရှားလာပါပြီ။
ရေမွှေးဟာ လူရဲ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းပါဝင်မှုပေါ်လိုက်ပြီး အနံ့ ပြောင်းလဲတတ် ပါတယ်.. အရှင်းဆုံး ဥပမာပြောရရင် ရေမွှေးတစ်မျိုးတည်းကို သူငယ်ချင်း ၂ယောက် အတူတူ ဆွတ်ထားပေမဲ့ လူတွေရဲ့ ကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းများ မတူညီမှုကြောင့် သူတို့နှစ်ဦးဆီကရတဲ့ အနံ့ဟာလည်း ရေမွှေး တစ်မျိုးတည်းက ဖြစ်ပေမဲ့ ကွဲပြားတဲ့ ရနံ့တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်လို့ ရေမွှေးပညာရှင်များက ပြောကြားကြပါတယ်. ဒါကြောင့်ရေမွှေးဝယ်မယ်ဆိုရင် သူတစ်ပါးရဲ့ အကြံပေးချက်၊ တိုက်တွန်းချက်ကြောင့် ရွေးချယ်တာမျိုး၊ မိမိကိုယ်တိုင် စမ်းမကြည့်ဘဲ တစ်ယောက်ယောက်ကို စမ်းသပ်ခိုင်းပြီးမှ ၀ယ်ယူတာမျိုး မပြုလုပ်သင့်ကြောင်းလဲ အကြံပေးကြပါတယ် ရေမွှေးကို ရွေးချယ်တဲ့ အခါမှာလည်း ပုလင်းဝမှ တိုက်ရိုက် ရှူရှိုက်ခြင်းမပြုလုပ်ဘဲ လက်ကောက်ဝတ် နေရာမှာ အနည်းဆုံး ၂စက်၃စက်လောက် ဆွတ်ပါ ၁၀မိနစ်လောက်ထား ပြီးမှရရှိလာတဲ့ အနံ့ကိုသာလျှင် စဉ်းစားဆုံးဖြတ် ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ အဆီပါဝင်မှုများတဲ့ ရေမွှေးဟာ တာရှည်ခံတဲ့ ရနံ့ကို ပေးနိုင်ပြီး ရေမွှေးအဆီ ပါဝင်မှုနည်းတဲ့ ရေမွှေးများဟာ ခနတာ မွှေးတတ်ပြီး မကြာခင်မှာဘဲ ရနံ့ပျယ်သွားတတ်ပါတယ်.
Red Door ( Elizabeth Arden)
ရေမွှေးကို လူတွေက အရူးအမူး ဖြစ်တတ်ကြတယ် ဆိုတာ သင်ရော ယုံကြည်ပါရဲ့လား.. နံမည်ကြီး အဆိုတော်၊ ရုပ်ရှင်စတားများနဲ့ အောင်မြင် ကျော်ကြားသူများဟာ ရေမွှေးတွေကို မိမိတို့ရဲ့ နံမည်နဲ့ ကိုယ်ပိုင် Brand အဖြစ် ထုတ်လုပ်လာကြတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရေမွှေးကို လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာအဖြစ်ပါ တန်ဖိုးထားလာကြကြောင်း သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ နံမည်ကြီး မင်းသားမင်းသမီး နံမည်များ၊ ကျော်ကြားသူများရဲ့ နံမည်များနဲ့ ထွက်လာတဲ့ ရေမွှေးပေါင်းစုံကို ဈေးကွက်အတွင်းမှာ အများအပြား တွေ့နိုင် ပါတယ်.။ ဒါကြောင့် ရေမွှေးဟာ လူ့အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းကဏ္ဍမှာ အရေးပါတဲ့အခန်းက ပါဝင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်...
Secret ( Rasasi)
သင်ရော သင့်ချစ်သူကို ရေမွှေးလက်ဆောင် ပေးဖူးရဲ့လား... မပေးဖူးသေးရင်တော့ ပေးကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။ သင့်ချစ်သူ သင့်ကို ပိုချစ်လာပါလိမ့်မယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်ကရော ရေမွှေးသုံးတတ်သူလား သင်ကိုယ်တိုင်လဲ ရေမွှေးကို မသုံးတတ်တဲ့သူ ဆိုရင် သုံးကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။ ရနံ့ သင်းပျံ့ပျံ့လေးက သင့်ရဲ့စိတ်တွေကို မကြုံစဖူး ထူးထူးကဲကဲ လန်းဆန်းနေစေပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု တိုးလာပါလိမ့်မယ်… ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ အနံ့လေးကြောင့် စိတ်ကြည်နူးမှု ရရှိခြင်းဟာ စိတ်ချမ်းသာမှုကို ငွေနဲ့ ၀ယ်ယူခြင်း တစ်မျိုးပါ... စိတ်ချမ်းသာမှုကို ငွေနဲ့ ၀ယ်ယူလို့ ရမယ်ဆိုရင်တော့ ဖြုန်းတီးတာမဟုတ်ဘဲ ငွေကုန်ခံရကျိုးနပ်တယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါလားရှင်။
မွှေးပျံ့တဲ့ ရနံ့ကို လူတိုင်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်
PLANET MYANMAR မှာ တင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဆောင်းပါးလေးတစ်ခုပါ။
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, March 20, 2010 Saturday, March 20, 2010 Labels: ရသစာစုများ
ကျွန်မရဲ့ အိမ်ဟာ ဘာတီမိုးမြို့ ဂျွန်ဟောပ့်ကင်းဆေးရုံနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ ရှိပါတယ်.. အောက်ထပ်မှာ ကျွန်မတို့မိသားစု နေထိုင်ကြပြီး အပေါ်ထပ်မှာတော့ ဆေးရုံမှာ ဆေးလာကုသူတွေ အခန်းမရလို့ အပြင်မှာ နေရတဲ့ လူနာတွေကို အငှားထားပါတယ်..
တစ်ရက် နွေဦးရာသီရဲ့ ညနေခင်းတစ်ခုမှာပေါ့… မိသားစုအတွက် ညနေစာကို ပြင်ဆင်နေတဲ့ အချိန်လေးမှာ တံခါးခေါက်သံ ခပ်တိုးတိုးလေး ထွက်ပေါ်လာပါတယ်.. တံခါးကို သွားဖွင့်လို့ ကြည့်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ မသပ်မရပ် အသွင်အပြင်နဲ့ ကျွန်မရဲ့ ၈နှစ်အရွယ် သားငယ်လေးလောက်သာ ရှိနိုင်မဲ့ အရပ်အမောင်းနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံး တုန်ယင်နေတဲ့ အဖိုးအို တစ်ဦးကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်.. သူ့မျက်နှာဟာ အဖုအပိန့်တွေ အပြည့်နဲ့ အသားနီများ လန်နေပြီး ကြောက်လန့်စရာ ကောင်းလောက်အောင် ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဖြစ်နေပါတယ်..
“မင်္ဂလာညနေခင်းပါ” အဖိုးအိုထံကနေ ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ နှုတ်ခွန်းဆက်သံ ထွက်လာပါတယ်.. “ဒီတစ်ညအတွက် အခန်းတစ်ခန်းများ ရနိုင်မလားလို့ လာစုံစမ်းတာပါ.. အဖိုးက ဒီမနက်မှာ အရှေ့ဘက် ပင်လယ်ကမ်းခြေက ရွာကလေးကနေ ဒီဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှု ခံယူဖို့ ထွက်လာခဲ့တာပါ. ရွာကို ပြန်မဲ့ ဘတ်စ်ကားက နောက်တစ်နေ့ မနက်မှ ထွက်မှာမို့ ညအိပ်စရာ တစ်နေရာလိုနေလို့ပါ. ” လို့ ကျွန်မကိုပြောပါတယ်.. ဆက်လက်ပြီး သူပြောပြတာက သူဟာ တစ်ညတာ တည်းခိုဖို့အတွက် အခန်းတစ်ခန်းကို ဒီနေ့ နေ့လည်စောင်း လောက်ကတည်းက လိုက်လံ ရှာဖွေနေကြောင်းနဲ့ ဘယ်မှာမှ အခန်းလွတ်မရခဲ့တဲ့အကြောင်းပါ.. “ အဖိုး သိပါတယ်.. အဖိုးရဲ့ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်နေတဲ့ မျက်နှာကြောင့် ဘယ်သူကမှ အခန်းတစ်ခန်း ငှားပေးချင်ကြမယ် မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပါ .. ဆရာဝန်ကလဲ အဖိုးရဲ့ ရောဂါကို ဆေးကုသမှု ဆက်လက်ခံယူဖို့ ညွှန်ကြားထားပါတယ်.. ” အဖိုးအိုစကားကို နားထောင် နေရင်းက ကျွန်မစိတ်ထဲမှာလည်း သူ့ကို ညအိပ်လက်ခံဖို့ကို တွန့်ဆုတ်နေမိပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ဆက်ပြီး ပြောလိုက်တဲ့ အဖိုးအိုရဲ့ စကားက ကျွန်မရင်ထဲမှာ သူ့ကို ဂရုဏာ စိတ်ကလေး ဖြစ်သွားစေခဲ့ပါတယ်.. “ ဒီဆင်ဝင်အောက်က ခုံတန်းလေးပေါ် အိပ်ခွင့်ရရင်လဲ အဖိုးအတွက် ဖြစ်ပါတယ်.. ဘတ်စ်ကားက မနက်စောစောထွက်မှာပါ... ဘယ်နေရာမှာဘဲ အိပ်ခွင့်ရရ အဖိုးအတွက် အဆင်ပြေပါတယ် ” လို့ ပြောရှာပါတယ်..
ကျွန်မကလဲ အိမ်အပေါ်ထပ်မှာ အခန်းလွတ် မကျန်တော့ပေမဲ့ သူ့အတွက် အိပ်စရာ တစ်နေရာ စီစဉ်ပေးမဲ့အကြောင်း နဲ့ ခုံတန်းလေးပေါ် ခဏထိုင်စောင့်ရင်း အနားယူဖို့ ပြောလိုက်ပါတယ်.. ကျွန်မလည်း အိမ်ထဲကို ပြန်ဝင်လာပြီး ညစာကိစ္စ ဆက်ပြီး စီစဉ်ပါတယ်.. ညစာအဆင်သင့် ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ အဖိုးအိုကို ကျွန်မတို့နဲ့အတူတူ ညစာစားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပေမဲ့ သူက ဗိုက်ပြည့်နေပါပြီ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ငြင်းပါတယ်..
ညစာစားပြီးလို့ အိုးခွက်ပန်းကန်တွေ သိမ်းဆည်းပြီးတဲ့အခါ အဖိုးအိုနဲ့ စကားစမြည် ပြောဖို့အတွက် ခုံတန်းလေး ရှိရာကို ထွက်လာပြီး စကားပြောဖြစ်ပါတယ်.. စကားပြောချိန်က တိုတောင်းပေမဲ့ ကျွန်မ သိခွင့် ရလိုက်တာက အဖိုးအိုဟာ လူပုံပန်းသဏ္ဍာန် သေးငယ် သော်လည်း ပြည့်ဝတဲ့ စိတ်နှလုံး ရှိသူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး အကောင်းမြင်တဲ့ အသိတရား ရှိသူတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းကိုပါ.. သူဟာ တံငါသည်တစ်ဦးအဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုသူဖြစ်ပြီး သူရဲ့သမီးနဲ့ သမက်ရယ် မြေးငါးယောက်ရယ်ကို ရှာဖွေ ကျွေးမွေးနေရသူ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြပါတယ်.. သူ့သမက်ဟာ မမျှော်လင့်ဘဲ ပြင်းထန်တဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာတစ်ခုကြောင့် လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့ ဒုက္ခိတ တစ်ယောက် ဖြစ်သွားခဲ့ရ ပါတယ်တဲ့..
ကျွန်မက သူ့ကို “အဖိုးတစ်ယောက်တည်းနဲ့ မိသားစုဦးရေ အများကြီးကို ရှာဖွေ ကျွေးမွေးနေရတာ ပင်ပန်းတယ် မထင်ဘူးလား.. ပြီးတော့ ခုလို ရောဂါဖြစ်လာတာရော စိတ်မညစ်မိဘူးလား” လို့ မေးမိပါတယ်.. အဖိုးက “ သမီးရယ် လူဆိုတာ အမြဲတမ်း လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေမှ၊ အခက်အခဲတွေရှိနေမှ ဘ၀ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ပိုပြီး ပီပြင် လေးနက်လာတာလေ.. လွယ်လွယ်ကူကူ အဆင်ပြေ ချောမွေ့နေမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ အစွမ်းအစတွေကို အသုံးချဖို့ အခွင့်အရေး ဘယ်ရှိတော့မှာလဲ… ပြီးတော့ အဖိုးအတွက် ဒီလို လှုပ်ရှားရုန်းကန်ဖို့ ခွန်အားတွေ ပေးထားတဲ့ ဒီလောကကြီးကိုဘဲ ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ.. အဖိုးရဲ့ သမက်ဆိုရင် အလုပ်လုပ်ချင်ဦးတော့တောင် သူ့မှာ ဒီလို အခွင့်အရေး မရှိနိုင်တော့ဘူး… အဖိုးမှာတော့ အခွင့်အရေးတွေ ရှိနေသေးတယ်.. ဒီအခွင့်အရေးတွေကို အသုံးချခွင့်ရနေတဲ့အတွက်လည်း ၀မ်းမြောက်နေရပါတယ်.. အဖိုးမှာ အခုဖြစ်နေတဲ့ ရောဂါအတွက်လည်း စိတ်ညစ်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး ဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေကို အကောင်းဆုံး ရင်ဆိုင်ဖို့ စိတ်ဓာတ်ကို ပြင်ဆင်ထားပြီးပါပြီ ”
အဖိုးအိုဟာ သူ့ဘ၀အကြောင်းကို ပြောပြနေပေမဲ့လို့ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ပြောနေတာ မဟုတ်သလို ပင်ပင်ပန်းပန်း ရှာဖွေနေရတဲ့ သူ့ဘ၀အတွက်၊ သူ့ ကံမကောင်းမှုအတွက် သူ့မှာရရှိလာတဲ့ အနာရောဂါ အတွက်လည်း ပြစ်တင် ညီးတွားနေတာမျိုး၊ နာကျင် ခံစားနေရဟန်မျိုး လုံးဝကို မရှိဘဲ ပကတိ ကြည်လင် ရွှင်ပျစွာနဲ့ သူ့ဘ၀ကို ကျေနပ်နေတဲ့ သူတစ်ဦးရဲ့ လေသံနဲ့သာ ပြောဆိုနေတာ ဖြစ်ပါတယ်.. .. လောကကြီးကိုလဲ သူ့ဘ၀ကို ဆက်လက် ရုန်းကန်နိုင်ဖို့ ခွန်အားတွေ၊ အခွင့်အရေးတွေ ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင် ၀မ်းမြောက်မိကြောင်း ထည့်ပြောပါတယ်.. အဖိုးအိုနဲ့ စကားပြောနေရင်းက သူ့ဆီက စိတ်အကြည်ဓာတ်လေး ကူးစက်လာပြီး ကျွန်မကိုယ်တိုင် ခွန်အားတစ်ခုခု ရရှိလာမိတယ်လို့ ထင်လာပါတယ်.. သိပ်ကို အတုယူစရာကောင်းတဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးပါဘဲ.. ဒီလို အဖိုးအိုတစ်ယောက်မှာ ခုလိုကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်ထားလေးနဲ့ အသိတရားလေးတွေ ရှိနေတာ ဘယ်သူက သိနိုင်မှာလဲနော်…
ညအိပ်ရာဝင်ချိန်ရောက်တော့ အဖိုးအိုအတွက် အိပ်ရာတစ်ခုကို ကလေးတွေရဲ့ အခန်းမှာ ပြင်ဆင် ပေးလိုက်ပါတယ်.. မနက်ခင်း အိပ်ရာက ကျွန်မနိုးတဲ့အချိန်မှာ အဖိုးအိုဟာ သူအိပ်ခဲ့တဲ့ အိပ်ယာလေးကို သပ်ရပ်စွာခေါက်သိမ်းထားပြီး အပြင်ဘက်က ခုံတန်းလေးမှာ သွားရောက်ထိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်. မနက်စာစားဖို့ ခေါ်တော့လဲ အခုဘဲ ဘတ်စ်ကားမှီအောင် သွားမှာဖြစ်လို့ မစားတော့ကြောင်း ငြင်းပယ်လိုက်ပြီး ထွက်ခွာဖို့ ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်.. မသွားခင်လေးမှာ သူက ကျွန်မကို ယဉ်ကျေးစွာ စကားဆိုပါတယ်.. နောင်ခါတွေမှာ သူ ဆေးကုသမှုခံယူဖို့ လာတဲ့အချိန်တိုင်း ဒီအိမ်လေးမှာ ခုလို တစ်ညတာ တည်းခိုခွင့် ပေးနိုင်ပါမလားလို့ တောင်းဆိုပါတယ်.. ပြီးတော့လဲ သူဆက်ပြောတာက “အဖိုးအနေနဲ့ သမီးတို့မိသားစုကို ဒုက္ခပေးသလို ဖြစ်မှာလဲစိုးပါတယ်.. သမီးရဲ့ကလေးတွေက အဖိုးကို ကိုယ့်အိမ် ကိုယ့်ယာမှာ နေထိုင်ရတဲ့ နွေးထွေးတဲ့ ခံစားချက်မျိုး ပေးနိုင်ခဲ့တယ်.. အဖိုးက ရုပ်ဆိုးလှတဲ့ အဖိုးမျက်နှာကြောင့် ကလေးတွေ ထိတ်လန့်မှာကို စိုးရိမ်နေခဲ့ပေမဲ့ ကလေးတွေက သတိထားမိပုံတောင် မရခဲ့ဘူး အဖိုးကို နွေးနွေးထွေးထွေး ကြည်ကြည် လင်လင် ဆက်ဆံခဲ့တယ်.. ” လို့ ပြောပါတယ်.. ကျွန်မကလဲ အဖိုးကို နောင်များမှာလဲ လာရောက် တည်းခိုနိုင်ပါကြောင်းကို ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်
နောက်တစ်ကြိမ် သူဆေးကုသခံဖို့ရောက်လာတဲ့ အချိန်က မနက် ရနာရီကျော်ကျော်လောက် ဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်မတို့အိမ်အတွက် အဖိုးအို ယူလာတဲ့ လက်ဆောင်တွေက ငါးအကြီးကြီးတစ်ကောင်ရယ်၊ ကျွန်မမြင်ဖူးသမျှထဲမှာ အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ကမာကောင် (ယောက်သွား) တစ်ချို့ရယ် ဖြစ်ပါတယ်.. သူက ဒီမနက် ထွက်မလာခင်လေးတင်မှ ဖမ်းလို့ရခဲ့တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ရှိနေသေးကြောင်းကို ပြောပြပါတယ်.. ကျွန်မစဉ်းစားကြည့်မိပါတယ်.. သူဒီကို မနက် ၇နာရီလောက် ရောက်လာဖို့အတွက်ဆိုရင် သူနေတဲ့ နေရာကနေ ဘတ်စ်ကားဟာ မနက်၎နာရီ ထွက်စီးရပါ လိမ့်မယ်.. အိုး… ဘုရားရေ ကျွန်မတို့ကို ခုလိုပေးနိုင်ဖို့အတွက် မနက် ဘယ်အချိန်များထပြီး ဒီငါးတွေ၊ ကမာကောင် တွေကို သူဖမ်းခဲ့တာပါလိမ့်…
အဲဒီနှစ်အတွင်းမှာ သူဟာ အကြိမ်ကြိမ် ဆေးကုသခံဖို့ရောက်လာတတ်ပြီး ရောက်တိုင်းလည်း အိမ်မှာ ညအိပ် တည်းခိုတတ်ပါတယ်.. သူရောက်လာတဲ့အကြိမ်တိုင်းလည်း ငါး၊ ကမာ၊ ဒါမှမဟုတ် သူ့ခြံကထွက်တဲ့ အသီးအရွက်တစ်ခုခု စတာတွေ တစ်ခါမှ မပါတဲ့အခါဆိုတာ မရှိခဲ့ဖူးပါ.. လူကိုယ်တိုင် ရောက်မလာတဲ့ အချိန်တွေမှာလည်း စာတိုက်ကနေ လတ်ဆတ်တဲ့ ငါး ၊ကမာ၊ စသည်များနဲ့ သူ့ခြံထွက် ဟင်းနုနယ်ရွက်၊ ကိုက်လန်ရွက် အစရှိသည်တို့ကိုလည်း သန့်စင်စွာ ဆေးကြောပြီး သေသေချာချာ ထုပ်ပိုးကာ အထူးအမြန် ချောပို့စံနစ်နဲ့ မကြာခန ပို့ပေးတတ်ပါတယ်.. တကယ်တမ်းတော့ အဖိုးအိုနေတဲ့အရပ်နဲ့ စာတိုက်ရှိတဲ့နေရာဟာ၃မိုင် တိတိကွာဝေးပြီး အဲဒီကို ရောက်အောင် လမ်းလျှောက်လို့ သွားရပါတယ်.. ပြီးတော့လဲ ခုလို အမြန်ချောပို့ စနစ်နဲ့ ပို့တဲ့အတွက် ပို့ခငွေကို ပုံမှန်နှုန်းထက် ၂ဆတိတိ ပေးရမယ်ဆိုတာ ကျွန်မ သိပါတယ်.. သူလာတိုင်းလဲ ကျွန်မတို့အတွက် လက်ဆောင်တွေ ယူမလာဖို့ အမြဲတမ်း ပြောပေမဲ့လို့ ပြောတဲ့အချိန်မှာတော့ အဖိုးအိုဟာ ပြုံးပြုံးရယ်ရယ်နဲ့ နားထောင်နေတတ်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ်မှာ ထုံးစံအတိုင်း လက်ဆောင်တွေ ပါလာတတ်မြဲ ဖြစ်ပါတယ်..
သူညအိပ်ပြီးလို့ ပြန်သွားတဲ့ မနက်ခင်းဆို အိမ်နီးနားချင်းတွေ ရောက်လာတတ်ပြီး ကျွန်မတို့ မိသားစုကို ၀ိုင်းပြောကြပါတယ်.. “ညတုန်းက ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဖြစ်နေတဲ့ အဖိုးအိုကို မင်းတို့က ညအိပ် လက်ခံခဲ့တယ်ပေါ့.. သူ့ကြောင့် မင်းတို့ရဲ့ အခန်းကိုငှားသူတွေ မငှားချင်တော့ဘဲ လူတွေနည်းသွားမယ် ဆိုတာ မစဉ်းစားမိဘူးလား တဲ့” သူ့ကြောင့် အခန်းငှားသူတွေ လျှော့နည်းမယ်ဆိုတာ ဟုတ်ကောင်း ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်.. ဒါပေမဲ့ သူတို့တွေသာ ဒီအဖိုးအိုနဲ့ တွေ့ခွင့်ရပြီး သူနဲ့သာ စကားပြောခွင့်ရလိုက်ကြရင် သူတို့ခံစားနေရတဲ့ ရောဂါ ဝေဒနာတွေကို ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်တော့မှာ မဟုတ်ဘဲ ကြံ့ကြံ့ခံ ရင်ဆိုင်ဖို့ အင်အားနဲ့ အသိတရားတွေ ရရှိလာမှာ သေချာပါတယ်.. ကျွန်မတို့ မိသားစု တစ်ခုလုံးကတော့ သူနဲ့သိကျွမ်း ခင်မင်ခွင့်ရလိုက်တာ အရမ်းကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်မိကြပါတယ်..
သူ့ဆီကနေ ကျွန်မတို့ ရလိုက်တဲ့ အသိတရားလေးက ဘယ်လောက် ဆိုးဝါးတဲ့ အခြေအနေ၊ အကြောင်းတရား တွေနဲ့ ကြုံတွေ့လာပါစေ လောကကြီးကို အပြစ်မတင်ဘဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရင်ဆိုင်တတ်တဲ့ သင်ခန်းစာ ကောင်းလေးပါ..ဒါဟာ လူတိုင်းလက်ခံကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ ခဲယဉ်းလှသလို တော်ရုံလူ မထားနိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်လေး တစ်ခုပါ.. ပြီးတော့လဲ သူတစ်ပါးရဲ့ ကျေးဇူးကို သူ့လောက် သိတတ်တဲ့ သူမျိုးကိုလည်း ကျွန်မတို့ ဘယ်မှာများ ရှာတွေ့နိုင်ပါဦးမလဲ.. ကျွန်မတို့ မိသားစုမှာ အခက်အခဲတွေ ကြုံလာမိတဲ့အခါ အဖိုးအိုရဲ့ စကားတွေ အဖိုးအိုရဲ့ စိတ်ထားတွေကို ပြန်ပြောင်း သတိရမိကြရင်း စိတ်ပျက်အားငယ် တာတွေ ၀မ်းနည်း ပူဆွေးတာတွေ အတန်အသင့် သက်သာရာ ရခဲ့ကြသလို သူနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့် ရလိုက်တာဟာလည်း ဘုရားပေးတဲ့ ဆုလာဒ်တစ်ခုအဖြစ် ကျွန်မတို့ မိသားစုက လက်ခံ ယုံကြည်ကြပါတယ်.. သူတစ်ပါးဆီက ရရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အကူအညီအတွက်လည်း မမေ့မလျှော့ ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တတ်ပုံလေးကလည်း အတုယူစရာ မဟုတ်ပါလားရှင်….
လူတိုင်းဟာ အဖိုးအိုလို ပြည့်ဝတဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အသိတရားများကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရကြမယ်ဆို သိပ်ကောင်းမှာပါဘဲရှင်.. လူတစ်ချို့ကတော့ မွေးရာပါ အရည်အချင်း တစ်ခုအနေနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အသိတရားများကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပေမဲ့ အချို့ လူတွေကျတော့ သူတစ်ပါးဆီက ပြန်လည်ဝေမျှလို့ ရရှိလာတဲ့ အသိတရားများကို လက်ခံ ယူတတ်ကြပါတယ်.. ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အဖိုးအိုမှာ ရှိနေတဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ အသိတရား ကောင်းလေးတွေကို လူတိုင်း လက်ခံကျင့်သုံးလာမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာကြီးဟာ အခုထက်တော့ နေပျော်ချင်စရာ ကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်..
ညီမလေးက အင်ကြင်းသန့် က ရေးပေးပါလို့ တောင်းဆိုပြီး တဂ်ထားတဲ့ အသိတရားဆိုတာ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးကို ဒီပိုစ့်လေးကိုဘဲ နံမည်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ဒါနဲ့ဘဲ ကျေနပ်ပေးပါလို့ ပြောပါရစေနော်..
Mary Bartels Bray ရဲ့ The Old Fisherman ကို ဘာသာပြန် ခံစားရေးဖွဲ့ပါသည်။
Thanks AMT for the name of Author.
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Tuesday, March 16, 2010 Tuesday, March 16, 2010 Labels: ရသစာစုများ
piceture from Here
ကျွန်မဟာ ကောလိပ်ကနေ ကျောင်းပြီးထားတာ မကြာသေးတဲ့ အသက်၁၄နှစ်၊ ၁၂နှစ်နဲ့ ၃နှစ်အရွယ် ကလေး ၃ယောက်ရှိတဲ့ မိခင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်.. .. ကောလိပ်မှာ ကျွန်မယူခဲ့တဲ့ ဘာသာရပ်က လူမှုရေး ပညာရပ်ပါ.. အတန်းမှာ ကျွန်မနောက်ဆုံး တင်ခဲ့ရတဲ့ စာတမ်းက အပြုံး ဆိုတဲ့ စာတမ်းလေးပါ.. . ဆရာမက ကျွန်မတို့ကို အတန်းပြင်ပကို ထွက်ပြီး လူတွေကို ကိုယ်က ပြုံးပြလိုက်လို့ ပြန်ပြီး ရရှိလာတဲ့ တုံ့ပြန်မှုကို စာတမ်းတစ်ခု ပြုစုခိုင်းပါတယ်.. ကျွန်မဟာ လူတိုင်းကို ဖော်ဖော်ရွေရွေ လိုက်လျှောညီထွေနေတတ်တဲ့ ဆက်ဆံရေး ကောင်းသူတစ်ဦးအဖြစ် နံမည်ရသူဖြစ်ပါတယ်.. လူတိုင်းကို ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ နှုတ်ဆက်ဖို့ ၀န် မလေးသူလဲဖြစ်တာကြောင့် ဒီစာတမ်း ပြုစုဖို့ကိစ္စက ကျွန်မအတွက်တော့ သိပ် လွယ်ကူမယ် ဆိုတာ ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်..
မတ်လရဲ့ တစ်ခုသော ရက်တစ်ရက်မှာ အဲဒီစာတမ်းလေးအတွက် ကျွန်မရယ်၊ ကျွန်မ ခင်ပွန်းရယ်၊ ကျွန်မတို့ရဲ့ အငယ်ဆုံး သားလေးရယ် အပြင်ကို ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်.. လမ်းမှာရောက်တော့ သားလေးကို အချိန်ပေးဖို့အတွက် မက်ဒေါ်နယ်ဆိုင်ကို ၀င် လာကြတယ်.. အကြီး ၂ယောက်ကတော့ ကျောင်းသွားတက်နေကြတဲ့အတွက် အိမ်မှာ မရှိပါဘူး.. ကျွန်မတို့ မိသားစုက ခုလိုဘဲ ကလေးတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး အချိန်ပေးပြီး နေထိုင်တဲ့ အလေ့အကျင့်ရှိပါတယ်.. မက်ဒေါ်နယ်ဆိုင်ရောက်တော့ လူများလွန်းတဲ့အတွက် ကောင်တာမှာ မုန့် ယူဖို့ကို တန်းစီပြီး စောင့်နေရပါတယ်.. ဒီလိုတန်းစီနေချိန်မှာဘဲ ကျွန်မရဲ့ အနီးတစ်ဝိုက်က လူတွေအားလုံးဟာ နောက်ဖက်ကို ဆုတ်ကုန်ကြတာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်.. ကျွန်မယောက်ျား အပါအ၀င်ဆိုပါတော့ရှင်.. ကျွန်မကတော့ နေရာကနေ တစ်လက်မတောင် မရွေ့မိပါဘူး..
စိတ်ထဲမှာ မသိုးမသန့် ခံစားချက်လေးဖြစ်လာတော့ ဘာကြောင့်လူတွေ နောက်ဆုတ် ကုန်တာလဲလို့ အကြောင်းအရာကို လိုက်ရှာဖို့ ကျွန်မရဲ့ အနောက်ကို လှည့်ကြည့်မိတော့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ညစ်ပတ်နံစော်နေတဲ့ အနံ့တစ်ခုက နှာခေါင်းထဲကို စူးကနဲ ၀င်လာပါတယ်.. အဲဒီအနံ့က ကျွန်မရဲ့အနောက်မှာ ရောက်လာပြီး တန်းစီနေတဲ့ စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ် အိမ်မဲ့ယာမဲ့ နှစ်ယောက်ဆီက ထွက်နေတာပါ.. ကျွန်မ သူတို့ကို ကြည့်လိုက်မိတဲ့အချိန်မှာ သူတို့ ၂ယောက်ထဲက အသက်ငယ်ငယ် ကောင်လေးဆီက ကြည်လင်တဲ့ အပြုံးလေး တစ်ခုကို ရလိုက်ပါတယ်.. ကောင်လေးရဲ့ မျက်လုံးလေးတွေဟာ တိမ်ကင်းစင်တဲ့ မိုးသားရဲ့ အရောင်လို ပြာပြာလဲ့လဲ့လေး… တစ်ကိုယ်လုံး ညစ်ပေ နွမ်းဖတ်ပြီး စုတ်ပြတ်နေပေမဲ့ သူ့အပြုံးနဲ့ သူ့မျက်လုံးဟာ အင်မတန်မှ သန့်ရှင်း ကြည်စင်လှတယ်..
ကျွန်မကြည့်နေမှန်းသိတော့ ကောင်လေးက သူရဲ့ ကြည်လင်တဲ့ အပြုံးကလေးနဲ့ မင်္ဂလာပါ လို့ နှုတ်ဆက်ရှာတယ်.. သူ့လက်ထဲမှာတော့ ငွေအကြွေစ တစ်ချို့ကို ရေတွက်နေပါတယ်.. ကြည့်ရတာ သူတို့မှာ ရှိသမျှ အကုန်နဲ့တူပါရဲ့.. ပြီးတော့ သူရဲ့ နောက်နားမှာ ရပ်ရင်း သူ့လက်ကို တွဲကိုင်ထားတဲ့ အသက်ကြီးကြီး လူတစ်ယောက်.. သူ့ကိုကြည့်ပြီး ကျွန်မသိလိုက်တာက ဒီလူဟာ စိတ်ကျန်းမာရေး အခြေအနေ မကောင်းသူ တစ်ယောက် ဆိုတာပါဘဲ… ဒီလိုဆိုရင် ကောင်လေးဟာ သူ့ကို ကြည့်ရှူ စောင့်ရှောက် နေတဲ့သူ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.. သူတို့ကို ကြည့်ရင်း ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ ထိထိခိုက်ခိုက် ခံစားမိတယ်.. လူဖြစ်လာတဲ့ဘ၀မှာ သူများနဲ့ တန်းတူ နေထိုင်ခွင့်မရရှာတဲ့ ဘ၀.. လူအများကတောင် နှာခေါင်းရှုံ့ပြီး ရှောင်ကျဉ်ခံရတဲ့ ဘ၀။
ကောင်တာက အမျိုးသမီးလေးက သူတို့ကို ဘာယူမလဲလို့ မေးလိုက်တယ်.. ကောင်လေးက သူ့ အပြုံး ကြည်ကြည်လေးနဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက် သကြားရော နို့ရော အကုန်ထည့်ပေးပါတဲ့.. သူတို့တတ်နိုင်သမျှလည်း ဒီကော်ဖီတစ်ခွက်စာဖိုးဘဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.. ပြီးတော့လဲ နွေးထွေးနေတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်လေးဟာ သူတို့ အတွက်တော့ လတ်တလောမှာ ပြင်ပက အအေးဒဏ်ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုလဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လေ…ထိခိုက်ဝမ်းနည်းမိတဲ့ စိတ်တွေနဲ့ သူတို့၂ယောက်ကို အငေးသားကြည့်နေမိတဲ့ ကျွန်မ.. ဘ၀လေးနဲ့မှ မလိုက်အောင် သန့်စင်တဲ့အပြုံးလေးနဲ့ အပြာရောင်မျက်ဝန်းပိုင်ရှင် ချာတိတ်လေးကို နက်နက်နဲနဲ ဂရုဏာ ဖြစ်မိပါတယ်.. သူ့ရဲ့ သန့်စင်ကြည်လင်လွန်းတဲ့ အပြုံးလေးကလဲ ကျွန်မရဲ့ စိတ်အာရုံကို သိမ်းကြုံး ဆွဲငင်သွားခဲ့တယ်..
သူ့ခမြာ ကျွန်မရဲ့သား အလတ်နဲ့မှ ရွယ်တူ ရှိရှာပေလိမ့်မယ်.. ကျွန်မတို့ရဲ့ သားလေးတွေကတော့ လုံခြုံတဲ့ အမိုးအကာအောက်မှာ၊ မိဘရဲ့ အုပ်ထိန်းမှုအောက်မှာ အပူအပင်မရှိ၊ ပညာတွေ သင်ခွင့်ရနေခဲ့တယ်.. ခု ဒီကလေးကျတော့ အိမ်ခြေ အိမ်ယာမရှိ စားသောက်စရာပင် အနိုင်နိုင်၊ သူ့ဖခင်လား ဘယ်သူလဲဆိုတာ မသိရတဲ့ ဒီစိတ်မပြည့်တဲ့ သူကိုလဲ ရှာကျွေးနေရသူ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.. ကျွန်မ ဆိုင်ကောင်တာက ကောင်မလေးကို ပြုံးပြလိုက်ရင်း ကျွန်မတို့ မိသားစုအတွက် မနက်စာ အပြင် နောက်ထပ် လူ၂ယောက်စာပါ အပို ထပ်မှာလိုက်ပါတယ်.. ပြီးတော့ တစ်ပန်းကန်စီ ထည့်ခိုင်းလိုက်ပြီး ဆိုင်ထောင့်က စားပွဲလေးမှာ ထိုင်ပြီး ကော်ဖီတစ်ခွက်ကို ၂ယောက်အတူ သောက်နေရှာတဲ့ လူကြီးနဲ့ ချာတိတ်လေးဆီကို ကျွန်မယူသွားခဲ့ပါတယ်..
ပန်းကန်၂ချပ်ကို စားပွဲပေါ်အသာချလိုက်ပြီး ချာတိတ်လေးရဲ့ အေးစက်နေတဲ့ လက်ကလေးကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်မိရင်း “ဒီမုန့်က သားတို့အတွက် အန်တီ ယူလာတာ” လို့ပြောလိုက်တော့ ကောင်လေးဟာ သူ့ရဲ့ ဘ၀မှာ အခုလို လူလူသူသူ ဆက်ဆံခံခဲ့ရဖူးပုံ မပေါ်တဲ့ အပြင် အကြင်နာတရား ဆိုတာလည်း ဘယ်ကမှ ရရှိခဲ့ဖူးပုံ မရပါဘူး.. သူဟာ မျက်ရည်တွေပြည့်နေတဲ့ အပြာရောင် မျက်ဝန်းလေးတွေနဲ့ ကျွန်မကို မော့ကြည့်ရင်းက ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ခပ်တိုးတိုးလေး ပြောရှာပါတယ်… ပြီးတော့ ပါးပြင်ပေါ် မျက်ရည်တွေ စီးကျလာရင်းက “ကျွန်တော်တို့ကို ဘယ်သူတွေကမှ ခုလို အစားအသောက် ကျွေးဖို့မပြောနဲ့ အရေးတယူတောင် မဆက်ဆံခဲ့ဖူးပါဘူး” တဲ့ .. ကျွန်မလဲ ဆို့နင့်လာတဲ့ ၀မ်းနည်းစိတ်တွေနဲ့ ပါးပြင်ပေါ် စီးကျလာတဲ့ မျက်ရည်တွေကို အသာသုတ်လိုက်ရင်း ကောင်လေးကို ကြင်ကြင်နာနာ ပြုံးပြလိုက်ပြီး ခင်ပွန်းနဲ့ သားလေးရှိရာကို လျှောက်လာခဲ့ပါတယ်..
စားပွဲပေါ်ရောက်တဲ့အခါ ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်ချလိုက်တော့ ကျွန်မခင်ပွန်းက ကျွန်မကို လေးလေးနက်နက် ပြုံးပြလိုက်ပြီး “ မိန်းမရေ မင်းဟာ ဒီနေ့တော့ သိပ်ကိုမွန်မြတ်တဲ့ အလုပ်ကလေးတစ်ခုကို လုပ်ခဲ့တာပါ ကွယ်” လို့ ပြောရင်းက ကျွန်မရဲ့ လက်ကလေးတွေကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပါတယ်.. ကျွန်မပါးပြင်ပေါ်မှာလည်း မျက်ရည်တွေက အဆီးအတားမရှိ စီးကျလာပြန်တယ်.. ရင်ထဲမှာလည်း ပြောမပြနိုင်တဲ့ ပီတိနဲ့ ၀မ်းနည်းခြင်းကို ခံစားနေခဲ့ရပါတယ်.. ဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီး အိမ်မရှိ ယာမရှိ ကလေးတစ်ယောက်ဆီက ဒီလောက် ကြည်လင်သန့်စင်တဲ့ အပြုံးလေးကိုလဲ ကျွန်မ ဘ၀မှာ ဘယ်တုန်းကမှ မရခဲ့ဖူးသလိုပါ.. ဒီအပြုံးလေးကို ကျွန်မ ဘယ်လိုမှ မေ့နိုင်မယ် မထင်ပါဘူး...
နောက်တစ်နေ့တော့ အဲဒီနေ့က အဖြစ်အပျက်လေးကို စာတမ်းလေးရေးပြီး အတန်းထဲ ယူလာခဲ့တယ်.. ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဆရာမလက်ထဲကို ထည့်လိုက်ပါတယ်. ဆရာမဟာ ကျွန်မရဲ့စာတမ်းလေးကို ဖတ်ပြီးနောက် ကျွန်မကို ကြည့်ကာ ဒီစာတမ်းလေးကို အတန်းထဲက လူတွေကို မျှဝေပေးလို့ရမလား လို့ မေးပါတယ်. ကျွန်မ ခေါင်းကို ဖြေးညင်းစွာ ငြိမ့်ပြလိုက်ပါတယ်.. ကျွန်မရဲ့ လူသားချင်း စာနာဖေးမခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကို တစ်ခန်းလုံးကြားအောင် ဆရာမက ဖတ်ပြနေပါတယ်.. ဒါဟာ လူတိုင်းရဲ့ ရင်ထဲမှာ အကြင်နာတရားလေးတွေ ပေါက်ဖွားလာအောင် လှုံ့ဆော်ပေးရာလဲ ရောက်သလို ကျွန်မရဲ့ ကောင်းမှုလေးတစ်ခုကို ပြန်လည် ဝေမျှခြင်းလည်း ဖြစ်တယ်မဟုတ်ပါလားရှင်…
လူတိုင်းဟာ ပြုံးဖို့ရာ လွယ်ကူပါတယ်.. မနက်ခင်းတိုင်း ကျွန်မတို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နှုတ်ဆက်ရင်း ပြုံးမိကြတယ်.. စီးပွားရေးလောက ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်၊ လူမှုရေးလောက ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် အပြုံးတွေများစွာနဲ့ တွေ့ခဲ့ရဖူးပါလိမ့်မယ်.. အဲဒီအပြုံးတွေထဲမှာ သန့်စင်ကြည်လင်တဲ့ မျှော်လင့်ချက်မပါတဲ့ အပြုံးလေးတွေနဲ့ တွေ့ရဖို့က လွယ်တော့ မလွယ်ကူပါဘူး.. အချို့သော အပြုံးကလေးတွေက အရောင်ဆိုးထားတဲ့ အပြုံးလေးတွေ၊ အချို့ကတော့ ဟန်ဆောင်ထားတဲ့ အပြုံးတုလေးတွေ ၊ အချို့ကတော့ စိတ်မပါလက်မပါတဲ့ အပြုံးလေးတွေ.. အချို့ကျတော့ မနာလိုတဲ့ အပြုံး.. အိုး.. အပြုံးများစွာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်.. အပြုံးဆိုတာ လူတွေရဲ့စိတ်ကို ရွှင်လန်းစေတယ် ဆိုပေမဲ့လို့ ကိုယ့်ရဲ့အပြုံးလေးဟာ ကြည်လင်သန့်စင်နေဖို့လဲ လိုသေးတယ်နော်.... ကိုယ်လုံးဝမသိတဲ့ လူတစ်ယောက်အပေါ် စေတနာ သဒ္ဓါတရားရှိဖို့ဆိုတာလဲ မလွယ်ကူလှပါဘူး.. လူတိုင်းမှာ လူလူချင်း ကိုယ်ချင်းစာတရားလေးတွေထားလို့ ကူညီတတ်တဲ့ စိတ်ကလေးတွေ မွေးဖွားနိုင်ကြမယ်ဆိုရင် အားလုံးဟာ ကြည်လင် လန်းဆန်းစွာ ပြုံးနိုင်ကောင်းပါရဲ့နော်....
Breanda ရဲ့ Lesson in Unconditional Love ကို ဘာသာပြန် ခံစား ရေးဖွဲ့ပါသည်။